Imnandi, kepha iyenyanyeka: isilinganiso sokudla ushukela kanye nemiphumela yokungeqisa > Ukuxilonga
Izinga lokudla ushukela ngosuku ukunciphisa umzimba
Uma kukhulunywa ngokukhuluphala nezinye izinkinga zempilo, abantu bavame ukusola amafutha adliwayo. Eqinisweni, ushukela uwukusolwa. Ukudla amanani amakhulu kukhulisa ingozi yokufa kusenesikhathi ngenxa yesifo senhliziyo. Uyomangala ukwazi ukuthi ushukela ungadliwa ngosuku.
Ibhodlela elilodwa kuphela lesiphuzo se-carbonated liqukethe izipuni eziyi-10 zoshukela. Futhi uma uphuza isiphuzo futhi udla ukudla okuhleliwe, khona-ke kudla okungaphezulu kakhulu kunokuba ucabanga. Ushukela ocashilewe ungatholakala kuyo yonke into kusuka ku-nokosa nososo kuya kokhokho kanye nesinkwa. Ubumnandi bungatholakala nasekudleni okungathandeki ekunambithekeni.
Leli nani lingadliwa ngosuku ngaphandle kokulimaza impilo. Ushukela ongeziwe - yilokhu okuthengela itiye, ikofi noma ukwengezela ku-curd ngenxa yobumnandi. Akunandaba ukuthi yenziwe nge-mhlanga noma ibhungane.
Inani elikhulu lale nto esilidla ekudleni okujwayelekile:
izithelo - ngaphezu kwakho konke kubhanana, ama-Persimmons, amagilebhisi, amapetshisi, njll.
izithelo ezomisiwe - funda ngazo esihlokweni esihlukile "kungakanani ongasidla izithelo ezomisiwe ngosuku",
confectionery - ushokoledi, ama-marmalade nokuningi,
indawo yokubhaka - ikakhulukazi kwizinkwa nasemikhombeni,
ushukela namaphuti ahlanganisiwe.
Lolu hlu luyaqhubeka njalo. Ngokuzayo, bheka ukwakheka komkhiqizo ngamunye owenzayo. Ngicabanga ukuthi uzomangala - ushukela ukuyo yonke indawo. Ngakho-ke, ngokwesilinganiso, umuntu udla izinkambiso ezine ezinconywayo ngosuku - amathisipuni angama-22 nsuku zonke! Impela lokhu sekuqile.
Uma uhlala uzizwa ukhathele, lokhu kuwuphawu oluqinisekile lokudla ushukela ngokweqile. Ukudla okumnandi kungakunika amandla okuqala. Kodwa-ke, lokhu kuyinto yesikhashana, futhi imiphumela ibe yinhlekelele.
Amandla aqina kakhulu lapho amazinga kashukela egazi evamile. Ngokusebenzisa ngokweqile amaswidi, izinga lawo egazini liyagxuma. Lokhu kuphumela emazingeni amandla aphezulu futhi aphansi. Ukuguquguquka okunjalo kuyingozi empilweni. Indlela yokuphuma izoba ukudla okulinganiselayo nokunempilo okuneprotein.
Yidla ukudla okumnandi njalo
Ingabe unxanela amaswidi? Lesi isibonakaliso esiqinisekile sokuthi uyidla kakhulu. Futhi lapho uyidla kakhulu, kulapho uyifunayo kakhulu. Lo umbuthano onobungozi lapho ubumnandi buba isidakamizwa. Ukudla okunjalo kuholela ekuphenduleni kwe-hormonal. Futhi-ke umzimba uzokwenzela ukuthi ufune ukudla amaswidi amaningi nangaphezulu.
Ucindezelekile noma Okhathazekile
Ucwaningo oluningi lubonise ubudlelwane obuqinile phakathi kwenani likashukela oludliwe nengozi yokucindezelwa. Kubandakanya nosizi, ukungabandakanywa emphakathini, kanye nokubambeka.
Mhlawumbe uye wabona ukuthi ngemuva kokudla amaswidi amaningi uzizwa ukhathele ngokomzwelo? Kokubili ngokomzimba nangokomzwelo. Umuzwa wokukhathazeka, ukukhathazeka njalo, ukwesaba kusho ukuthi sekuyisikhathi sokulawula ukudla kwakho okumnandi.
Ubukhulu bezingubo bukhuphukile
Ushukela omningi - amakhalori ngokweqile. Azikho izakhi ezinempilo, i-fiber, amaprotheni. Ngeke akuthambise, ngakho-ke maningi amathuba okudla kakhulu. Ngale ndlela ukhipha i-insulin, i-hormone ebamba iqhaza elibalulekile ekuzuzeni isisindo. Idlulisela ushukela kwizitho ukuze isetshenziselwe ukukhiqiza uphethiloli.
Lapho udla okuthe xaxa, yilapho umzimba ukhiqiza i-insulin eminingi. Ekugcineni, ukumelana ne-insulin kungavela. Umzimba ngeke usaphendula kuwo ngendlela efanele. Ukudla ngokwekhalori ngokweqile kuyimbangela yokuthola isisindo.Lokhu kunikeza umsebenzi owengeziwe kumanyikwe, kukhulisa ubungozi bokuba nesifo sikashukela.
Isikhumba saqala ukubonakala sibi kakhulu
Uma uhlala uhlushwa umqubuko, sekuyisikhathi sokubukisisa okudlayo. Ukusetshenziswa ngokweqile amaswidi kungaholela ezinkingeni zesikhumba: induna, i-eczema, amafutha ngokweqile noma ukoma.
Usebenzisa izidakamizwa ukwelapha, kepha hhayi ukuguqula indlela odla ngayo, ngeke uyixazulule inkinga. Abaningi bathole ukuthi ukuvimbela ushukela kuzothuthukisa kakhulu ukubukeka kwesikhumba nempilo yonke.
Ngiyaqiniseka ukuthi abazali bakho bake bakutshele ukuthi ushukela omningi ulungile ngamazinyo akho. Futhi lokhu akuyona inganekwane. Ngokwezinga elikhulu, kwakunguye owayefanele asolwe ngakho konke ukugcwaliswa nobuhlungu bemiselekazi.
Amagciwane asala ezinhlayiyeni zokudla phakathi kwamazinyo. Kwakhiwa i-Acid, okuholela ekuwohlokeni kwamazinyo. ISaliva isiza ukugcina ibhalansi inempilo. Futhi ukusetshenziswa ngokweqile kwamaswidi kungathinta izinga le-acidity. Kuzovumela amagciwane ukuthi achume futhi ande.
Izinyathelo ezi-5 ezibalulekile zokunciphisa ushukela
Uma useduze nezimpawu ezingenhla, kufanele uthathe izinyathelo zokunciphisa ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo olimazayo. Ngemuva kwalokho ungajabulela impilo enhle kakhulu.
Ungaphuzi ushukela. Uma uphuza iziphuzo ezinekhabhoni, iziphuzo zezithelo, ikofi elimnandi, uthola amakhalori amaningi angenalutho. Esikhundleni seziphuzo ezinoshukela, khetha amanzi. Ungangeza ulamula, ulamula noma ijusi lewolintshi kuyo ngephunga elimnandi. Noma yenza ama-compotes wezithelo.
Gwema ukudla okunamafutha amancane. Ngoba cishe zihlala zigcwele ushukela, osetshenziselwa ukufaka esikhundleni samafutha.
Funda uhlu lwezithako. Lapho uthatha ukudla okuhlanganisiwe, funda uhlu lwezithako. Ushukela ongeziwe ungafihla amagama: i-fructose, ujusi womhlanga, um maltose, umhlanga webhali, njll.
Phila impilo enempilo. Yehlisa ukucabanga ngokuzivocavoca, ukuzindla, ukuphefumula okujulile. Futhi uthole amahora angama-7-8 okulala njalo ebusuku. Lapho-ke ukunxanela amaswidi ngokwemvelo kuzokwehla.
Faka esikhundleni ezinye izindlela ezinempilo. Isibonelo, izithelo ezimnandi - ubhanana, amagilebhisi, ama-Persimmons, izingcezwana zamakhabe noma amakhabe. Kepha ungayidli ngokweqile.
Ngikholwe, ngaphandle kwalo mkhiqizo kungenzeka ukukwenza. Yenza ukuhlolwa - ungadli ushukela ngeviki eli-1. Bukela umzimba wakho. Ngiphinde ngaba nephutha lokususa ushukela ngokuphelele, ikakhulukazi ekuseni isipuni esetiyeni. Ngemuva kwesonto, ngajwayela ukuphuza iziphuzo ngaphandle kwakhe. Futhi uyazi, itiye liyahlukahluka ekunambithekeni 🙂
Ngabe udla ushukela ongakanani ngosuku? Bhala imibono yakho bese ubhalisela ukubuyekeza. Ngisenezihloko eziningi ezithandekayo ezingxoxwayo. Sizokubona maduze!
Ngo-2013, cishe amathani ayizigidi eziyi-178 kashukela akhiqizwa emhlabeni. Ngokwesilinganiso, umuntu udla cishe amakhilogremu angama-30 kashukela ngonyaka (aze afike ku-45 kg emazweni athuthukile), ohambelana nama-kilojoule angaphezu kwama-320 umuntu ngamunye ngosuku. Futhi leli nani liyanda unyaka nonyaka.
Ushukela Ingabe igama elijwayelekile elenziwa ngamakhemikhali athinta amanzi anyibilikayo asetshenziswa ekudleni. Onke angama-carbohydrate aqukethe i-carbon, hydrogen ne-oxygen.
Njengawo wonke ama-carbohydrate, ushukela uqukethe "amayunithi" ahlukile, inani lawo lingalingana ngoshukela abahlukahlukene. Kuya ngenani la "amayunithi" anjalo kashukela ahlukaniswe:
1) monosaccharides (ushukela olula), oqukethe iyunithi eyodwa elula,
2) ama-disaccharides aqukethe ama-monosaccharides amabili,
1) Ushukela olula (ama-monosaccharides):
ushukela (owaziwa nangokuthi i-dextrose noma ushukela wamagilebhisi)
ISufrose iyi-disaccharide equkethe i-fructose noshukela (umoba noma ushukela we-beet),
IMaltose iyidisabheki equkethe izinsalela ezimbili zikashukela (ushukela we-malt),
I-Lactose yi-disaccharide ene-hydrolyzed emzimbeni ukuya glucose ne-galactose (ushukela wobisi).
Kukhona noshukela oqukethe ama-monosaccharides ayi-3 noma ngaphezulu. Isibonelo, i-raffinose yi-trisaccharide equkethe izinsalela ze-fructose, ushukela kanye ne-galactose (etholakala kumaswidi kashukela).
Empilweni yethu yansuku zonke, sibiza i-sucrose yeshukela, ngoba ivame ukusetshenziswa njenge-sweetener ekudleni.
Ngingawuthola kuphi ushukela?
Ezitshalweni eziningi, izinhlobo ezahlukahlukene zoshukela zingatholakala. Okokuqala, kwinqubo ye-photosynthesis, kwakhiwa glucose kuzo kusuka ku-carbon dioxide namanzi, bese-ke kuphenduka okunye ushukela.
Kodwa-ke, ekugxilisweni okwanele ukuthola ukululama okusebenzayo, ushukela ukhona kuphela kumoba noshukela beet.
Ngefomu layo elihlanzekile (elicwengekile), ushukela umhlophe, kanti ezinye zezinhlobonhlobo zazo zimdaka ngombala wentengiso eyenziwe ngoshukela, ama-molasses (molasses).
Izinto ezahlukahlukene zingaba nokunambitheka okumnandi, kepha aziweli ngaphakathi kwencazelo kashukela. Ezinye zazo zisetshenziswa njengezindawo ezinoshukela futhi zingokwemvelo (i-stevia, i-maple syrup, uju, ushukela we-malt, i-xylitol, njll) noma i-artificial (saccharin, ipartartame, i-sucralose, njll.) Ama-sweeteners, amanye anobuthi (chloroform, lead acetate).
Yikuphi ukudla esikuthola ushukela?
Ukuze unqume ukuthi ushukela ongakanani ngosuku esiwusebenzisayo nokuthi usuka kumiphi imithombo, kubalulekile ukuthi sikunake lokho ushukela ungaba yimvelo futhi ungezwe .
Ushukela wemvelo - Lokhu kuyatholakala kwimifino emisha, izithelo, nemikhiqizo yobisi.
Ushukela Ongeziwe - Onke ushukela asetshenziswa lapho kulungiswa isidlo futhi umuntu uzimele engeza ukudla noma iziphuzo. Ibizwa nangokuthi "thukulula ».
Kukhona nomqondo Ushukela ofihliwe - eyodwa esingazi ngayo kwesinye isikhathi, kepha itholakala emikhiqizweni eqediwe (ama-ketchups, amasoso, amajusi, njll.).
Ukusetshenziswa ushukela kuhlotshaniswa nokukhuluphala. Kukholakala nokuthi kungenye yezimbangela zesifo sikashukela, isifo senhliziyo, isifo sokuwohloka komqondo kanye namakhala.
Kwenziwe ucwaningo oluningi lokuqinisekisa lezi zikhundla, kodwa kube nemiphumela ehlukile. Lokhu kungenxa yobunzima bokuthola abantu beqembu elilawulayo abangadli ushukela nakancane. Noma kunjalo, kusobala ukuthi abantu abadla inani elikhulu loshukela kungenzeka bahlupheke kulezi zifo ezingenhla.
Ngaphezu kwalokho, asikhulumi ngoshukela esingeza thina uqobo ekudleni futhi singalawula inani laso, njengoshukela owengezwa emikhiqizweni eyenziwe ngomumo eyenziwe ngomzimba, iziphuzo ezithambile, ama-ketchups, amasoseji, nemikhiqizo esekuqediwe. Lona ushukela okuthiwa "ufihliwe".
Abakhiqizi bangeza cishe kuyo yonke imikhiqizo yokudla, kufaka phakathi leyo okungakaze kwenzeke kuyo ngaphambili. Ososayensi balinganisela ukuthi cishe amaphesenti angama-25 kilojoule nsuku zonke esiwathola ngoshukela onjalo, ngaphandle kokwazi ngawo.
Ushukela - Kungumkhiqizo onekhalori ephezulu ophamba kalula ngumzimba nomthombo wamandla ahlanganiswe ngokushesha.
Inani layo lamandla yi-400 kcal nge-g 100. isipuni esisodwa ngaphandle kwephezulu yi-4 g kashukela, i.e. 16 kcal!
Umthamo oshukela ophakanyisiwe woshukela kumuntu omdala onempilo awudluli kuma-90 g . Ngaphezu kwalokho, lesi sibalo sifaka zonke izinhlobo zoshukela - ne-sucrose, ne-fructose, ne-galactose. Kufaka zombili ushukela wemvelo kanjalo kungeziwe ukudla.
Kulokhu, inani likashukela ozifakayo ekudleni akufanele lingeqi i-50 g - leli lilingana nezipuni eziyi-13 (ngaphandle phezulu) kashukela ngosuku. Ngomsebenzi osindayo womzimba, leli nani lingaba likhudlwana.
(I-1 ithisipuni engenhla ingama-4 g kashukela, i.e. 16 kcal!)
I-WHO ibeka ngamabomu ushukela wansuku zonke “weshukela” wesilinganiso senani le-10% lokudla kwekhalori nsuku zonke. Khumbula ukuthi "mahhala" ibizwa ngokuthi ushukela, umuntu awengeza ngokuzimela ekudleni noma eziphuzweni. Lokho ushukela, okuyingxenye yamajusi, izithelo, uju, “akukhululekile” futhi akunakwa.Ngakho-ke, ngokusho kwezincomo ze-WHO, uma okuqukethwe nsuku zonke kilojoule kungama-kilojoule angama-2000, khona-ke amakhalori angama-200 = amagremu angama-50 kufanele aqhamuke kushukela "wamahhala".
Ngasikhathi sinye, odokotela bezenhliziyo e-USA batusa ukwehlisa le dosi ngesigamu - kuze kube ngu-5% wenani le-caloric yansuku zonke.
Ufake ushukela ongakanani enkomishini yakho yekhofi yasekuseni? Zimbili, nezinkezo ezintathu? Ithemba elincane. Izazi zezempilo zibeke umkhawulo ngokudla ushukela usuku lonke, futhi akukukhulu kangako.
Asenzeni lokhu i. Ushukela ukusolwa ngamakhilogremu angeziwe. Nguye owenza uzizwe ungavikelekile ekubhukudi.
Uma ungayeki ukumuncwa ushukela ongalawulwa, ngokuzayo kuzokunikeza isifo sikashukela nesifo senhliziyo.
Ushukela ngamunye unesimo sawo.
Lokhu kufaka wonke ushukela ongeziwe. Lokho wukuthi, ushukela abakhiqizi abawubeka ekudleni (amakhukhi, i-ketchup noma ubisi ngoshokoledi).
Ushukela unomphumela ofanayo nobuchopho bethu njenge-cocaine. Kungakho kubalulekile kakhulu ukulawula isifiso sakho soshukela. Photo: Unsplash / pixabay / CC0 Isizinda Somphakathi
Kodwa-ke, ushukela oqukethwe izithelo, imifino neminye imikhiqizo yemvelo akusebenzi lapha. Kibo, izazi zokudla akazibeki umkhawulo.
Ukudla okungokwemvelo kuqukethe i-fiber, amavithamini, ama-antioxidants kanye namaminerali. Ngakho-ke, akufanele bakhawulelwe. Imikhawulo isebenza kuphela kushukela elingeziwe.
Ungathola kanjani ngoshukela
Bheka ushukela ohlwini lwezithako. Ingafihla ngaphansi kwegama elithi sucrose, ushukela onsundu, isiraphu yommbila ophezulu we-fructose, i-dextrose, nje i-fructose, imaple noma isiraphu yomhlanga.
Uma izithako ezinjalo ziphakathi kwezinhlanu eziphezulu, ngakho-ke kungcono ukukhetha enye into.
Ushukela wemvelo noma owengeziwe?
Ukuze uqonde ukuthi ushukela ongeziwe ungakanani kumkhiqizo, uqhathanise nomlingani wemvelo. Isibonelo, thatha i-yogurt yemvelo engenalo ushukela kanye noshukela ojwayelekile eshalofini.
Imikhiqizo yobisi iqukethe ushukela wemvelo - i-lactose, uma kungekho okunye okungeziwe kubo.
I-100 g yogurt yemvelo iqukethe ama-4 g we-lactose (ushukela). Futhi uma iyogathi imnandi, ushukela wonke ufakiwe.
Vele, asibona amarobhothi, futhi kwesinye isikhathi ungaziphatha. Kepha akufanele njalo ube izinyo elimnandi.
Ushukela ungakanani ngosuku, uma nje lo mkhiqizo uyisithako esibi kakhulu ekunakekelweni kwanamuhla.
Inikeza amakhalori ngaphandle kokufakwa kwezakhi zomzimba futhi kungaphazamisa ukusebenza kwe-metabolism ekuhambeni kwesikhathi.
Ukudla i-sucrose eningi kuhambisana nokuthola isisindo kanye nezifo ezahlukahlukene, ezinjengesifo sikashukela sohlobo II nesifo senhliziyo.
Ungadla uswidi olungakanani?
Yize umnandi ungalimazi emzimbeni, umzimba awudingi lo mkhiqizo omningi ngokudla okunempilo. Izithasiselo zengeza amakhalori angaphezulu kanye ne-zero izakhi ekudleni kwakho. Umuntu odinga ukwehlisa isisindo uma ukhuluphele, ukukhuluphala, ushukela noma ezinye izifo ezitholakala ekudleni, noma ngabe yikuphi, kufanele awuvimbele lo mkhiqizo ngangokunokwenzeka.
Kufanele udle ushukela ongakanani ngosuku:
Kwabesilisa: ama-kcal ayi-150 ngosuku (amagremu angama-37,5 noma amasipuni ayi-9).
Abesifazane: amakhalori ayi-100 ngosuku (amagremu angama-25 noma amathisipuni ayi-6).
Izingane ezineminyaka emi-4 kuya kwele-6 akumele zidle okungaphezulu kwama-19 g noma ama-isipuni ayi-5 kashukela ngosuku
Izingane ezineminyaka engu-7 kuye kweyi-10 akufanele zibe nezinzipuni ezingaphezu kwama-24 g noma ama-6 kashukela ngosuku
Izingane ezineminyaka engu-11 nangaphezulu akufanele zidle ama-isipuni angaphezu kuka-30 g noma we-7 kashukela ngosuku
Ukuqonda lokhu, isiphuzo esijwayelekile esakhiwe ngo-330 ml singaba nama-35 g noma wezipuni ayi-9 kashukela.
Yikuphi ukudla okunoshukela omningi?
Ukunciphisa i-sucrose ekudleni, lokhu kudla kufanele kugwenywe, ngokubaluleka:
Iziphuzo ezithambile: iziphuzo ezinoshukela zingumkhiqizo omubi futhi kufanele zigwenywe njengesifo.
Ijusi yezithelo: lokhu kungamangala, kepha amajusi ezithelo aqukethe ushukela ofanayo neziphuzo zekhabhoni!
Amaswidi namaswidi: kuyadingeka ukukhawulela kakhulu ukusetshenziswa kwamaswidi.
Imikhiqizo yamakhekhe: amakhukhi, amakhekhe, njll. Zivame ukuba noshukela omningi kanye nama-carbohydrate acolisisiwe.
Izithelo ezihlanganisiwe kusiraphu: esikhundleni sokukhetha izithelo ezintsha.
Ukudla okunamafutha kuvame ukuba nokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwe-sucrose.
Izithelo Ezomile: Gwema izithelo ezomisiwe ngangokunokwenzeka.
Phuza amanzi esikhundleni sejusi futhi unciphise ukunambitheka kwikhofi noma itiye lakho. Esikhundleni salokho, ungazama izinto ezifana nesinamoni, i-nutmeg, ukukhipha i-almond, i-vanilla, i-ginger noma i-lime.
Malini ekudleni naseziphuzweni
Lo mkhiqizo wokudla ungezwa cishe zonke izinhlobo zokudla neziphuzo ukwenza ukunambitheka kwawo kube okumnandi noma ukugcina ukunambitheka kwawo. Futhi lokhu akugcini emikhiqizweni enjengamakhekhe, amakhukhi, iziphuzo ezithandekayo namaphaza Ungakuthola futhi kubhontshisi obhakwe, isinkwa nezinhlamvu. Ngakho-ke, udinga ukwenza isiqiniseko futhi uhlole uhlu lwezithako kwelebula ukuthi ungakanani lo mkhiqizo uqukethe.
Iqiniso ukuthi ukudla ngokweqile kuzoba nomthelela ongemuhle empilweni:
Umkhiqizo uhlinzeka umzimba ngamakhalori angenalutho anikezela amandla ngaphandle kwezakhi zomsoco. Ngenxa yalokhu, sidla okuningi ngaphandle kokuzizwa sigcwele. Lokhu kuholela engcupheni eyengeziwe yokuthola isisindo, ezifweni ezithile kanye nomjikelezo wokukhuphuka kanye nokuncipha kwamazinga wamandla, okunikeza umuzwa wokukhathala nokoma okumnandi kakhulu
Ukusetshenziswa kaningi kungaholela ekuwohlokeni kwamazinyo.
Kungabuye kuholele ku-Type 2 sikashukela, amazinga ayo akhuphuke kakhulu eminyakeni yamuva. Ukukhuluphala ngokweqile noma ukukhuluphala futhi kwandisa ingozi yokuba nalesi sifo.
Ilebula kashukela ifaka amagama ahlobene namaswidi. Nawa amanye amagama ajwayelekile nezincazelo zawo:
Ijusi Yezithelo Gxila
Isikhunta Sombila Ophezulu
I-Dextrose, i-fructose, ushukela, i-lactose, i-maltose, i-sucrose)
Eminyakeni engama-30 eyedlule, abantu bebesebenzisa njalo ama-carbohydrate asezingeni eliphansi ekudleni kwabo, okubangela ubhubhane lokukhuluphala. Ukunciphisa i-carbohydrate kunciphisa amakhalori futhi kungasiza ukuthuthukisa impilo yenhliziyo nokulawula isisindo sakho.
Kunconywa ukuthi ukungena kwakho okumnandi kwansuku zonke kungaphansi kwe-5% yamandla akho okudla. Kwabesifazane abaningi, lokhu akuyona ngaphezu kwama-kilojoule ayi-100 ngosuku futhi hhayi ngaphezu kwama-kilojoule ayi-150 ngosuku kwabesilisa (noma cishe amathisipuni ayi-6 ngosuku kwabesifazane namathisipuni ayi-9 ngosuku kwabesilisa).
Ekudleni kwakho kwansuku zonke, amakhalori asuka kumaswidi adinga inani elincane, futhi kukhona okunye ukudla ukuze uhlangabezane nezidingo zakho zokudla okunempilo.
Abaningi bezwe isisho esithi: "Ushukela ngukufa okumhlophe." Lesi sitatimende asivelanga ngengozi, ngoba ushukela uqukethe amakhalori amaningi futhi uthinta kabi izinqubo ze-metabolic. Ukuningi ngokweqile ekudleni kuholela ekuzuzeni isisindo, kubangele ukukhuluphala, izinkinga zenhliziyo kanye nesifo sikashukela. Kepha iningi lisetshenziselwa kakhulu ukusebenzisa “okumnandi okumhlophe” kangangokuba abakwazi ukucabanga ngosuku olulodwa ngaphandle kwalo mkhiqizo. Ngakho-ke ungadla ushukela ongakanani ngosuku ngaphandle kokulimaza impilo yakho?
Izinhlobo ushukela nokuqukethwe kwalo emikhiqizweni ehlukile
Ngisho nabasekeli bokuphila ngendlela enempilo abakwazi ukuwaqeda ngokuphelele ama-carbohydrate ekudleni kwabo. Bayingxenye yezithelo, amajikijolo, imifino ethile. Futhi yini esingayisho nge-pasta nokunye ukudla okumnandi okumnandi? Abakhiqizi bafunde ukufihla ukufa okumhlophe ngaphansi kwamanye amagama. I-Fructose, ushukela, i-dextrose, i-sucrose, i-lactose, uju, imaltose, isiraphu, zonke izinhlobo zoshukela.
Ushukela ungahlukaniswa ngezigaba eziningana: okuphakelayo, umbala, ukubukeka nokuthungwa. Okudume kakhulu ushukela owenziwe nge-granulated kanye nokubhaliswa kwawo - inhlama. Zombili lezi zinhlobonhlobo zenziwa kusuka kuma-beet futhi asetshenziswa ngenkuthalo ku-confectionery kanye nama-sphereres we-cicion. Ushukela onsundu uyeza olandelayo. Kuvunwa kusuka kumoba. Isetshenziselwa ukwenza amasoseji kanye namagilasi.
Kwezinhlobo ezithile, ezihlotshisiwe zingahlukaniswa. Luwuketshezi ngokungaguquguquki futhi luqukethe izingxenye ezilinganayo ze-fructose noshukela. Inambitheka kamnandi kunoshukela ojwayelekile. Isetshenziselwa ukwenziwa kwemikhiqizo yotshwala noma uju lokufakelwa.
Enye into ehlukile ushukela we-maple. I-syrup iqoqwa ngesikhathi sokuhamba kwama-juices ku-maple obomvu noma omnyama. Kunezinhlobo ezi-2 zoshukela we-maple: Canadian and American. Ngenxa yobunzima bokuqoqa ubumnandi obunjalo abubizi, ngakho-ke, awuzange usetshenziswe kabanzi ekuphekeni.
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, kunezinye izinhlobo zoshukela: isundu, ushukela, uswidi, njll. Noma kunjalo, noma ngabe yikuphi ukwahlukahluka okukhethayo, konke kunekhwalithi efanayo: anokuqukethwe kwekhalori ephezulu. I-100 g yomkhiqizo iqukethe kusuka ku-306 kuya ku-374 kcal. Lokhu kufanelekile ukukhumbula ngaphambi kokudla lesi sidlo noma leso.
Nalu uhlu lokudla okudumile nokuqukethwe kwabo ushukela.
Izimpikiswano mayelana nengozi kashukela:
Ukuphazamiseka kwe-lipid metabolism. Ngenxa yalokhu, amaphawundi angeziwe ayatholakala, i-atherossteosis iyakhula.
Isifiso sokudla siyakhula. Kunesifiso esingalawulwa sokudla okunye.
Izinga likashukela wegazi liyakhuphuka, okungadala isifo sikashukela.
Ikhalsiyamu ihlanzwa amathambo.
Ukungavikeleki kuyancipha futhi impilo iya isiwohloka, kuba nezinkinga ngamazinyo, kuphakama izifo ezahlukahlukene.
Izingcindezi ziyakhula futhi zihlala isikhathi eside. Kulesi simo, ushukela ungaqhathaniswa notshwala. Okokuqala kuza ukuphumula, khona-ke umuntu uwela ekudumaleni okukhulu kakhulu.
Ukulahleka kokuqina nokuqina kwesikhumba, kuvela imibimbi, ukuguga kungakafiki isikhathi.
Kodwa-ke, akuzona zonke izinhlobo zoshukela eziyingozi. Ukwakheka komkhiqizo ongafakwanga kubandakanya amavithamini namaminerali (kwesinye isikhathi ngamanani amakhulu). Ukusetshenziswa ngokulingana akugcini nje ngokulimazayo, kepha futhi kunezinzuzo ezithile. Isibonelo, kukuvumela ukuthi ululame ngokushesha ngemuva kokuxineka kakhulu ngokomzimba nangokwengqondo noma ukunikela ngegazi njengonikelayo. Ngakho-ke, uma kungenzeka, sebenzisa izinhlobo zomhlanga onsundu empilweni yansuku zonke.
Ungasika kanjani ukusetshenziswa kwakho
Manje njengoba usuwazi ukuthi ungadla ushukela ongakanani ngosuku ngaphandle kokulimaza umzimba, kufanelekile ukubheka ukuthi unganciphisa kanjani ukusetshenziswa kwawo. Zama ukulandela imithetho ethile.
Nqaba iziphuzo ezithambile ezinoshukela kanye namajusi wezithelo ekukhiqizeni kwezimboni. Banokuqukethwe ushukela okuphezulu kakhulu. Phuza amanzi acwebile noma amaminerali.
Yehlisa ukubamba kwakho amaswidi, amaswidi, namakhekhe. Uma kunzima ukunikela okusheshayo, ukunciphisa izingxenye kancane kancane. Faka esikhundleni sezithelo nezitshulu ezigcinwe kusiraphu ngemikhiqizo emisha.
Uma kunzima ukuyeka ushukela ngokuphelele, sebenzisa izinhlobonhlobo zawo ezinsundu noma i-stevia njenge-sweetener.
Ungadli ukudla okunamafutha amancane noma kokudla. Ukuwenza ube muhle, abakhiqizi bengeza ushukela omningi kuwo. Musa ukuncika ezitsheni ezomisiwe. Zigcwele noshukela.
2. Ukulimala kokudla ushukela ngokweqile.
Ukulimala ushukela namuhla kuyabonakala futhi kufakazelwe izifundo eziningi zesayensi.
Ukulimala kakhulu ushukela womzimba, yiqiniso, lezo zifo ezitusayo. Isifo Sikashukela, Ukukhuluphala, ...
Ngakho-ke, akunandaba ukuthi kunconywe ukwedlula ukungena nsuku zonke ushukela.
Izazi zezemvelo zaseMelika ziye zaqhathanisa umlutha wezinyo omnandi ngokweqile notshwala, ngoba zombili lezi zindlela zokuzithokozisa zinezifo ezithile ezingamahlalakhona.
Kodwa-ke, akufanele ukhiphe ngokuphelele ushukela ekudleni - ukondla ubuchopho futhi kuyadingeka ukuze umzimba usebenze kahle. Hlobo luni lukashukela okuzoxoxwa ngalo? Ngizolandisa ngokuqhubekayo.
3. Izinga loshukela ngosuku kumuntu.
Akunakwenzeka ukuphendula lo mbuzo ngokungananazi - liyini izinga eliphephile lokusetshenziswa ushukela ngosuku kumuntu? Kuya ngezici eziningi: ubudala, isisindo, ubulili, izifo ezikhona nokunye okuningi.
Ngokuya kocwaningo olwenziwe yi-American Heart Disease Association, ukudla okuphezulu nsuku zonke komuntu ophilile futhi osebenzayo ngamasipuni ayi-9 kashukela kwabesilisa kanye namzipuni ayi-6 kwabesifazane. Lezi zibalo zifaka ushukela ongeziwe nezinye izinhlayiya ezivela emikhiqizweni oyisebenzisayo kuhlelo lwakho (ngokwesibonelo, lapho ufaka ushukela etiyeni noma ekhofi) noma ufakwa lapho ngumenzi.
Kubantu abakhuluphele kakhulu noshukela, ukuthathwa kokudla okungezwe ushukela nanoma yikuphi okumnandi kufanele kuvinjelwe noma kuncishiswe. Leli qembu labantu lingathola ushukela wabo ojwayelekile emikhiqizweni enempilo equkethe ushukela wemvelo, ngokwesibonelo, ezithelweni nakwimifino. Kodwa lokhu akusho ukuthi ukusetshenziswa kwabo kungenzeka ngamanani angenamkhawulo.
Kodwa-ke, umuntu ophilile kufanele adle okuningi okudla, abanikeze okuthandwa ngaphezu kwemikhiqizo enoshukela ongeziwe noma imikhiqizo esetshenzisiwe ngendlela yezimboni.
Ngokwesilinganiso, umuntu ojwayelekile udla cishe. Futhi hhayi ngokuqondile, kodwa ngamasoseji athengiwe, amasobho amnandi, amasoseji, amasobho osheshayo, ama-yoghurts neminye imikhiqizo. Leli nani loshukela ngosuku lisongela izinkinga eziningi zempilo.
EYurophu, ushukela wabantu abadala uhluka emazweni ahlukahlukene. Futhi kwenza, ngokwesibonelo, ama-7-8% wokudla okuphelele kwama-khalori eHungary naseNorway, aze afike ku-16-17% eSpain nase-UK. Phakathi kwezingane, ukusetshenziswa kuphezulu - i-12% eDenmark, eSlovenia, eSweden futhi icishe ibe ngama-25% ePortugal.
Vele, abahlala emadolobheni badla ushukela omningi kunabahlala emaphandleni. Ngokwezincomo zakamuva zeWorld Health Organisation, ukusetshenziswa “koshukela wamahhala” (noma ushukela ongeziwe) kufanele kwehliswe kungaphansi kwe-10% yokusetshenziswa kwamandla nsuku zonke. Ukuyibeka ngaphansi ngaphansi kwama-5% ngosuku (okulingana namagremu angama-25 noma amathisipuni ayi-6) kuzokuvumela ukuthi uthuthukise impilo yakho.
Zibonisa ukulimala okukhulu kakhulu, ngoba zithwala ushukela emzimbeni wonke ngokushesha.
4. Unganciphisa kanjani ukuthathwa ushukela. Kunokuthi ungene esikhundleni.
Kepha kuthiwani uma ungakwazi ukukhawulela umthamo wakho woshukela ngokwezilinganiso ezinconyelwa nsuku zonke? Zibuze umbuzo: ngabe usukulungele ngempela yini ukuzinikela “ekugqilazweni ushukela”, futhi, usengcupheni yempilo yakho, unikeze ukukhetha entokozweni yesikhashana? Uma kungenjalo, ngiphakamisa ukuthi uzidonsele ndawonye bese uqala ukushintsha isimo sakho sengqondo kulokhu okudlayo manje.
Ukuze unciphise ukungena kwakho ushukela, zama ukudla kwe-detox yezinsuku eziyi-10. Ngalezi zinsuku kufanele uyeke yonke imikhiqizo equkethe ushukela, futhi ngasikhathi sinye kusuka futhi. Lokhu kuzokusiza uhlanze umzimba futhi uqede umlutha.
Ukudla ushukela wakho kungahle kufinyelele kwi-dekhymuyimu eyamukelekayo uma uba yiyo. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuntuleka kwamahora amabili okulala kuvusa izifiso zama-carbohydrate asheshayo. Uma ulele ngokwanele, kuzoba lula kakhulu ukunqoba ukufisa kwamaswidi. Lapho singalali ngokwanele, sizama ukwenza ukuntuleka kwamandla futhi sizitholele ukudla ngokuzenzakalelayo. Ngenxa yalokhu, sidla ngokweqile futhi sikhuluphele, okuyinto engasizi ngalutho kunoma ngubani.
Ngokungangabazeki, impilo yethu namuhla igcwele izingcindezi. Lokhu kugqame neqiniso lokuthi izinga le-cortisol emizimbeni yethu liyanda, okudala ukuthi ihlaselwe yindlala. Ngenhlanhla, kunendlela yokuphuma, futhi ilula. Ososayensi beluleka ukuthi basebenzise inqubo yokuphefumula okujulile.Chitha imizuzu embalwa, uphefumula kakhulu, nerve ekhethekile - i-vagus nerve - izoshintsha inkambiso yezinqubo ze-metabolic. Esikhundleni sokwenza amadiphozithi wamafutha esiswini, azoqala ukuvutha, futhi yilokho kanye okudingayo.
Ushukela, izinzuzo nokulimazeka kwako okufanele kuqondwe ngokuphelele ngumuntu wanamuhla, akufanele. Konke kuhle ngokulinganisela, nokusetshenziswa komkhiqizo ongaphephile kangako - nangaphezulu.
Bukela ividiyo ukuthi ingakanani ushukela ongayidla ngosuku:
Ushukela uw umkhiqizo abambalwa namuhla abangenawo. Ngokuvamile kufakwa ezitsheni ezahlukahlukene. Ama-sweeteners ngokuvamile awakwazi ukucabanga impilo ngaphandle kwakhe. Namuhla, le ndlovishini iyathengiswa kuwo wonke amagumbi. Kepha ochwepheshe bathi ukusetshenziswa kwayo ngokweqile kuyingozi empilweni. Ngakho-ke, udinga ukwazi ukuthi ungakanani ushukela ongawudla ngosuku. Sizokhuluma ngalokhu esihlokweni sethu.
Ingabe kukhona ushukela?
Abalandeli amaswidi kunzima ukukholisa ukuthi ukusetshenziswa kwayo ngokweqile kuyingozi. Abanye abakwazi ukucabanga ngephuzo lekhofi noma letiye ngaphandle kwezikhwanyana ezimbalwa zikashukela. Ake sibheke lokhu: ingabe le mpuphu emhlophe idla noma cha?
Kungezwe namuhla emikhiqizweni eminingi, futhi kweminye yemvelo (ngokwesibonelo, ezithelweni) kuqukethwe ekuqaleni.
Izinzuzo zikashukela ezikhiqizwe embonini yilezi:
Ngaphezu kwezithelo, ushukela wemvelo ungatholwa ngisho nasesinkwa nase-pasta. Kuyavela ukuthi umuntu akanaso isidingo sangempela! Amaswidi avele aba umuthi, futhi akekho ongawenqaba. Inani likashukela lodwa likhiqizwa:
Noma kunjalo, akukhathalekile ukuthi ulutha luphi uhlobo lomkhiqizo, empeleni kuvela ukuthi wonke umuntu unokuqukethwe kwekhalori okufanayo. Lesi sitha esimhlophe silimaza umzimba nsuku zonke.
Okulimazayo noma okuhle
Kepha ushukela ongakanani ongawusebenzisa ngosuku? Faka ufulawa omncane kwikhofi, itiya, kuqukethwe ku-pie nokunye ukudla. Lokho wukuthi, siyisebenzisa ngokungalawuleki. Maye, isikhathi eside lokhu ngeke kuqhubeke ngaphandle kwemiphumela emibi. Ngemuva kwakho konke, ushukela:
kungumkhiqizo osindayo womzimba, othi, lapho umunwa, uholele ekushodeni kwe-calcium, ngoba udambisa okokugcina kwamathambo, ngenxa yalokhu, ukukhula kwamathambo kuqubuka namazinyo abhujiswe,
izicucu ezihlanjululwayo zifakwa kancane kancane esibindini, ziguqulwa zibe yi-glycogen, equkethe ama-molecule eglucose, kuthi lapho sekuvunyelwe into evunyelwe, izitolo ezinamafutha ziqale ukwakha,
kunomuzwa wendlala, okungewona wemvelo, futhi ukukhuphuka okubukhali kwamazinga we-insulin ne-glucose kubangela ngokweqile,
ngenxa yalokho, izifo zezifo zenhliziyo zanda, ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi iyakhula - amazinyo amnandi akhokhela uthando lwawo,
ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa okwandayo kwamaswidi kuholela ekugugeni kwangaphambi kwesikhathi, njengoba ukuqina kwesikhumba nokuqina, elahlekile, ama-radicals wamahhala aqongelela emzimbeni futhi imibimbi ivele ngokushesha,
ushukela umuthi wangempela, kancane kancane obangela umlutha oqinile,
amaswidi enza buthaka amasosha omzimba, ngaleyo ndlela evula umnyango wesifo sikashukela ngengozi yezinkinga eziningi.
Uma, ngemuva kwemininingwane yonke etholakele, umbuzo usasebenza kuwe: kungakanani ushukela ongadakwa ngosuku, khona-ke siphawula ukuthi ochwepheshe banikeza izinombolo ezihlukile. Lokhu kanye nezinkezo ezingama-9-10 nsuku zonke, noma kusuka kuma-30 kuye kwangama-50 amagremu. Kepha ngemuva kokufunda ngayo yonke imiphumela emibi, ngisho nokwazi ukuthi ungadla amagremu amangaki kashukela ngosuku, kuba nzima impela. Uma kungekho inzuzo kulo mkhiqizo, ingabe kufanelekile? Futhi uma uthatha isinqumo sokulahla ushukela,-ke ukuthi ungawukhipha kanjani ekudleni, uma kungatholwa imikhiqizo yemvelo esiyidla nsuku zonke?
Ukuze uthole ukuthi ungadla ushukela ongakanani ngosuku, ukuze ungalimazi impilo yakho, okokuqala kufanele uthole ukuthi yiluphi ushukela wemvelo oluqukethwe emikhiqizweni yemvelo, kanye netafula, lapho kuvela khona zonke izinkinga nezinkinga. Uma ugwema lolu hlobo lwesibili lukashukela, khona-ke umthwalo osemzimbeni uzokwehla kakhulu. Futhi uma umtholela indawo yemvelo, khona-ke izinyo elimnandi ngeke lihlale lingathandeki.
Yiziphi izinganekwane ezisitshela ngoshukela?
Abalandeli bamaswidi bamphendula bemkhombisa ukuthi ushukela ugcina imisebenzi ejwayelekile yobuchopho. Kepha uma ubheka udaba, kuvela ukuthi lokhu kuyinsumansumane nje. Umzimba udinga i-glucose. Kodwa-ke, uyayithola kuma-carbohydrate ayinkimbinkimbi atholakala kuzo zombili izithelo nasezihlolweni, imifino neminye imikhiqizo yemvelo. Ngaphezu kwalokho, ukwahlukanisa kancane, into ayingeni egazini ngokushesha, ngakho-ke, izinga likashukela lehla ngokushelela, futhi aludingi ukondliwa okwengeziwe ngamaswidi.
Ama-sweeteners afana neNeotam, i-Aspartame ne-Sucralose ayaziwa emakethe. Umbuzo uphakama wokuthi bawusizo kangakanani emzimbeni nokuthi bayabhekana nomsebenzi wabo yini. Kodwa ochwepheshe abayinikezi impendulo eqondile kuwo. Ucwaningo luyaqhubeka. Into eyodwa eqinisekile: Abesifazane abakhulelwe nezingane bayenqatshelwa.
Omunye umbuzo othokozisayo ufuna labo abafuna ukunciphisa umzimba: ushukela ongakanani ngosuku umuntu angalusebenzisa ukuze alahlekelwe amakhilogremu angeziwe? Impendulo yezinyo elimnandi izodumaza. Ngale njongo, uzodinga ukushiya ngokuphelele ushukela bese uqala ukudla ukudla okunempilo kahle.
Kepha kuthiwani ngalabo abangakwazi ukucabanga impilo yabo ngaphandle koshukela? Kungenzeka ukubuyisa esikhundleni ngisho noju? Naphezu kweqiniso lokuthi uju luqukethe amakhalori angaphansi kancono kunoshukela, uwumkhiqizo owusizo kakhulu womzimba futhi ngeke uwulimaze. Ngakho-ke, kunjalo, esikhundleni sikashukela, kungcono ukusebenzisa i-spoonful of uju.
Kodwa ukuhlukahluka okuhlukahlukene kwe-confectionery ne-soda nakanjani kuwele "kuhlu olumnyama". Ngakho-ke, kuyodingeka ukhohlwe ngazo zonke izinhlobo zamabha, namakhekhe, ukudla okulula, amajusi ezitolo zezithelo nezithelo ezikheniwe. Kepha akunakulindeka ukuthi izingane zikwazi ukuchaza ukulimala kwamaswidi. Ngakho-ke, lapho unquma ukuthi ingakanani ushukela ingane ongayisebenzisa ngosuku, udinga ukucabanga, okokuqala, mayelana nefomu elitholakala kwimikhiqizo yemvelo. Ushukela wokufakelwa, ngokusho kwabanye ochwepheshe, uyadingeka ezinganeni ezingaphansi kweminyaka emi-3 ubudala ngenani le-10 g ngosuku, futhi kusukela kwabaneminyaka engu-3 - 15 g.
Yini esikhundleni sakhe
Esikhundleni sokubheka impendulo yombuzo, zingaki isipuni seshukela esingaphuzwa ngosuku, kungcono ukuthola imikhiqizo yemvelo futhi uyisebenzise. Isibonelo, umuthi we-stevia unokunambitheka okumnandi. Kungezwe ekudleni ngaphandle kokulimaza impilo yomuntu.
“I-sweetener” enhle kakhulu kuzoba uju olushiwo ngenhla. Kepha kungcono ukungawudlulisi, ngoba inani lamakhalori kulo mkhiqizo lisesikalini.
Ngakho-ke, kungcono ukuyeka ngokuphelele amaswidi. Imikhiqizo yemvelo iqukethe izinto ezingaphezu kwezanele ezidingekayo empilweni yomuntu. Ngakho-ke, akufanele ukholelwe ushukela namaswidi akhiqiza izinkampani eza nezinganekwane ezahlukahlukene ngokuthi lo mkhiqizo ulusizo kanjani, nokuthi ushukela ungamuqeda malini ngosuku sikashukela nezinye izifo. Impendulo enhle kakhulu: cha.
kubhekisa enye yezinto ezidumile zokudla. Ngokuvamile kusetshenziswa njengesengezo ezitsheni ezahlukahlukene, hhayi njengomkhiqizo ozimele.Abantu cishe sonke isidlo (okungahlanganisi ukwenqaba ngamabomu) badla ushukela. Lo mkhiqizo wokudla weza eYurophu cishe eminyakeni eyi-150 edlule. Ngemuva kwalokho kwakubiza kakhulu futhi kungafinyeleleki kubantu abavamile, kwakuthengiswa ngesisindo emakhemisi.
Ekuqaleni, ushukela wenziwa kuphela kusuka kumoba, ezigxotsheni zawo kukhona okuqukethwe okuphezulu koshukela omnandi, okulungele ukuthola lo mkhiqizo omnandi. Kamuva, ushukela wafundwa ukukhishwa kumaswidi kashukela. Njengamanje, ama-40% alo lonke ushukela emhlabeni enziwa ngamabhungane, kanti ama-60% aqhamuka kumoba Ushukela uqukethe i-sucrose emsulwa, ethi emzimbeni womuntu ingahlukaniswa masinyane ibe ushukela kanye ne-fructose, ecijwa emzimbeni ngaphakathi imizuzu embalwa, ngakho-ke ushukela uwumthombo omuhle kakhulu wamandla.
Njengoba wazi, ushukela umane nje ungcwengekile ohlanzeke kakhulu, lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ushukela ocoliweyo. Lo mkhiqizo awunanzuzo yezinto eziphilayo, ngaphandle kwamakhalori.Amagremu ayi-100 kashukela aqukethe ama-374 kcal.
Ukulimala Ushukela: Amaqiniso ayi-10
Ushukela ekusetshenzisweni okweqile ikhulisa kakhulu ingozi yokuba nezifo zesistimu yehliziyo nenhliziyo. Kumele kuqashelwe ukuthi kubantu ababizwa ngezinyo elimnandi, ngenxa yokudla kakhulu ushukela, izivikeli mzimba ziyaphazamiseka futhi buthaka kakhulu (bheka). Ushukela nawo unomthelela ekuguguleni kwesikhumba kungakabi yisikhathi futhi ukhulisa izakhiwo zawo, okuholela ekulahlekelweni kokuqina. Ukuqubuka izinduna kungavela, ukushintshashintsha kobuso.
Ngemuva kokuba imininingwane yocwaningo yaziwe, umuntu angabiza ushukela ngokuthi “ubuthi obumnandi”, ngoba isebenza emzimbeni kancane empilweni yomuntu wonke, okulimaza kakhulu umzimba. Kepha bambalwa abantu abanganikela lo mkhiqizo ukuze balondoloze impilo yabo.
Kulabo abangazi, kufanele kushiwo ukuthi kusetshenziswa inani elikhulu le-calcium ukuthola ishukela elicwengekile emzimbeni womuntu, okufaka isandla ekufakweni kwezimbiwa kusuka kwezicubu zamathambo. Lokhu kungaholela ekukhuleni kwesifo esifana nokuthi, i.e. amathuba anda wokuqhekeka kwamathambo. Ushukela udala ukulimala okubonakalayo ku-enamel yezinyo, futhi lokhu sekuyiqiniso elifakazelwe, akunasizathu sokuthi abazali basesabise sonke kusukela ebuntwaneni, bethi "uma udla amaswidi amaningi, amazinyo akho alimele", kukhona iqiniso kulezi zindaba ezesabekayo.
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi babona ukuthi ushukela unokuthambekela kokunamathela emazinyweni, ngokwesibonelo, uma usebenzisa i-caramel, ucezu olunamathele ezinweni futhi lwabangela izinhlungu - lokhu kusho ukuthi koqweqwe lwawo ezinjeni selivele lonakalisiwe, futhi lapho lingena endaweni elimele, ushukela uyaqhubeka “umnyama” "ibhizinisi ngokuchitha izinyo. Ushukela futhi usiza ukukhuphula i-acid emlonyeni, okudala izimo ezinhle zokusakazwa kwamagciwane ayingozi, wona, alimane nje alimaze i-enamel yezinyo, awonakalise. Amazinyo aqala ukubola, alimaze, futhi uma ungaqali ngesikhathi, imiphumela ingaba mnandi kakhulu, kuze kube sekukhishweni kwamazinyo. Umuntu owake waba nezinkinga ezinkulu zamazinyo wazi kahle ukuthi izinyo lingabuhlungu ngempela, futhi kwesinye isikhathi alikwazi ukubekezelela.
1) Ushukela ubangela ukumiswa kwamafutha
Kumele kukhunjulwe ukuthi ushukela osetshenziswa ngabantu ufakwa esibindini njenge-glycogen. Uma izitolo ze-glycogen esibindini zidlula okwejwayelekile, ushukela odliwayo uqala ukufakwa ngohlobo lwezitolo ezinamafutha, imvamisa yilezi zindawo okhalweni nasesiswini. Kunemininingwane yokucwaninga ephakamisa ukuthi uma udla ushukela kanye namafutha, ukumuncwa kweyesibili emzimbeni kuyathuthuka. Kalula nje, ukudla ushukela omningi kuholela ekukhuluphisweni. Njengoba sekushiwo, ushukela uw umkhiqizo onekhalori ephezulu engenawo amavithamini, i-fiber namaminerali.
2) Ushukela udala umuzwa wendlala yamanga
Ososayensi bakwazi ukubona amaseli ebuchosheni bomuntu abaphethe ukulawula isifiso sokudla futhi kungadala umuzwa wamanga wokulamba. Uma udla ukudla okunokuqukethwe ushukela omningi, khona-ke aqala ukuphazamisa ukusebenza okujwayelekile, okujwayelekile kwama-neurons, okugcina kuholele ekuzweni kwendlala yamanga, futhi lokhu, njengomthetho, kuphela ngokudla ngokweqile kanye nokukhuluphala kakhulu.
Kunesinye futhi isizathu esingadala umuzwa wendlala yamanga: lapho kukhuphuka kakhulu izinga le-glucose emzimbeni, kuthi ngemuva kokuwohloka okubukhali okufanayo, ubuchopho bufune ukuqedwa ngokushesha kwe-glucose yegazi. Ukuphuza ushukela ngokweqile kuvame ukuholela ekunyukeni okusheshayo kwezinga le-insulin neglucose emzimbeni, futhi lokhu kugcina kuholele ekuzweni okungamanga kokudla nendlala ngokweqile.
3) Ushukela ukhuthaza ukuguga
Ukusetshenziswa ngokweqile ushukela kungadala imibimbi esikhunjeni ngaphambi kwesikhathi, ngoba ushukela ugcinwa endaweni egcinwe ku-collagen yesikhumba, ngaleyo ndlela unciphise ukuqina kwawo. Isizathu sesibili esenza ushukela afake isandla ekuguguleni ukuthi ushukela uyakwazi ukuheha nokugcina ama-radicals mahhala abulala umzimba wethu ngaphakathi.
5) Ushukela ubamba umzimba wamavithamini we-B
Onke amavithamini B (ikakhulukazi uvithamini B1 - thiamine) ayadingeka ekugayweni okufanele nasekuthanjisweni ngumzimba wakho konke ukudla okuqukethe ushukela nesitashi. Amavithamini we-B B awanawo ama-vithamini e-B. Ngalesi sizathu, ukuze kuthathe ushukela omhlophe, umzimba ususa amavithamini e-B emisipha, isibindi, izinso, izinzwa, isisu, inhliziyo, isikhumba, amehlo, igazi, njll. Kucacile ukuthi lokhu kungaholela ekutheni emzimbeni womuntu, i.e. kwizitho eziningi ukusweleka okuqinile kwamavithamini we-B kuzoqala
Ngokusebenzisa ushukela ngokweqile, kukhona "ukubanjwa" okukhulu kwamavithamini we-B kuzo zonke izitho nezinhlelo. Lokhu, kungaholela ekuxinekeni ngokweqile kwemizwa, ukugayeka okuthe xaxa, umuzwa wokukhathala okungapheli, ukwehla kwekhono lokubona, i-anemia, izifo zemisipha nesikhumba, ukushaya kwenhliziyo neminye imiphumela eminingi emibi.
Manje sesingasho ngokuqiniseka okugcwele ukuthi emaphesenti angama-90 amacala ukwephulwa okunjalo bekungavinjelwa uma ushukela uvinjelwe ngesikhathi. Lapho kunokuphuzwa kwama-carbohydrate ngesimo sawo semvelo, ukusweleka kwe-Vitamin B1, njengomthetho, akukhuli, ngoba i-thiamine, edingekayo ekuqhekekeni kwesitashi noma ushukela, itholakala ekudleni okuqediwe. I-Thiamine ayidingeki kuphela ukukhula kwesifiso esihle, kodwa futhi nezinqubo zokugaya ukusebenza kahle.
6) Ushukela uthinta inhliziyo
Isikhathi eside, ukuxhumana kwasungulwa phakathi kokusebenzisa ngokweqile ushukela (omhlophe) nomsebenzi we-cardiac). Ushukela omhlophe unamandla ngokwanele, ngaphezu kwalokho, uthinta kabi umsebenzi wesicubu senhliziyo. Kungadala ukuntuleka okukhulu kwe-thiamine, futhi lokhu kungaholela ku-dystrophy yezicubu zemisipha yenhliziyo, futhi ukuqongelela uketshezi olungeqile kungakhula, ekugcineni kungaholele ekuboshweni kwenhliziyo.
I-7) Ushukela wehlisa izindawo ezonga amandla
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi uma basebenzisa ushukela omningi, bayoba namandla amaningi, ngoba ushukela empeleni yi-carriers enkulu. Kepha ukukutshela iqiniso, lo umbono ongalungile ngezizathu ezimbili, ake sixoxe ngazo.
Okokuqala, ushukela ubangela ukuntuleka kwe-thiamine, ngakho-ke umzimba awukwazi ukuqeda i-metabolism yama-carbohydrate, ngenxa yalokho ukuphuma kwamandla okutholile akuphumi ngendlela ebingaba ngayo ngokugaya ukudla okuphelele. Lokhu kuholela eqinisweni lokuthi umuntu ukhulume ngezimpawu zokukhathala kanye nokunciphisa okuphawuleka komsebenzi.
Okwesibili, izinga likashukela eliphakeme, njengomthetho, lilandela ngemuva kokwehla kwezinga likashukela, okuvela ngenxa yokwanda ngokushesha kwamazinga e-insulin egazi, okuthi, futhi, kwenzeke ngenxa yokwanda okukhulu kweshukela. Lo mbuthano onesihluku uholela eqinisweni lokuthi emzimbeni kukhona ukwehliswa kwezinga likashukela liphansi kakhulu kunokwejwayelekile. Lo mkhuba ubizwa ngokuthi ukuhlaselwa kwe-hypoglycemia, okuhambisana nalezi zimpawu ezilandelayo: isiyezi, ukungakhathali, ukukhathala, isicanucanu, ukuqubuka okukhulu nokuthuthumela kwemikhawulo.
8) Ushukela uyisikhuthazi
Ushukela ezindaweni zalo uyisikhuthazo sangempela. Lapho kukhuphuka ushukela wegazi, umuntu azizwe egcwala umsebenzi, unesimo senjabulo ethambile, umsebenzi wohlelo lwezinzwa olunozwela uyenziwa. Ngenxa yalesi sizathu, ngemuva kokudla ushukela omhlophe, sonke siyabona ukuthi izinga lokushaya kwenhliziyo lenyuka ngokubonakalayo, ukwanda okuncane komfutho wegazi kwenzeka, ukuphefumula kuyaphulukisa, futhi ithoni yohlelo lwezinzwa lwe-autonomic selukhuphuka ngokuphelele.
Ngenxa yokushintsha kwe-biochemistry, engahambisani nanoma yiziphi izenzo zomzimba ngokweqile, amandla atholakele awahlanganisi isikhathi eside. Umuntu unomuzwa wokungezwani okuthile ngaphakathi. Kungakho ushukela uvame ukubizwa ngokuthi "ukudla okucindezelayo."
Ushukela wokudla ubangela ushintsho kwisilinganiso se-phosphorus ne-calcium egazini, imvamisa kakhulu izinga le-calcium likhuphuka, kuyilapho izinga le-phosphorus lincipha. Isilinganiso esiphakathi kwe-calcium ne-phosphorus siyaqhubeka singalungile amahora angaphezu kwama-48 ngemuva kokuba ushukela usuqediwe.
Ngenxa yokuthi isilinganiso se-calcium ku-phosphorus sengozini enkulu, umzimba awukwazi ukumunca ngokugcwele i-calcium ekudleni. Okuhle kunakho konke, ukusebenzisana kwe-calcium ne phosphorus kwenzeka ngesilinganiso esingu-2,5: 1, futhi uma lezi zilinganiso zephulwa futhi kune-calcium ebonakalayo eyengeziwe, khona-ke i-calcium eyengeziwe ngeke nje isetshenziswe ngumzimba.
I-calcium eyengeziwe izodonswa ngaphandle kanye nomchamo, noma ingakha amadiphozithi amnyama kunoma yiliphi izicubu ezithambile. Ngakho-ke, ukudla i-calcium emzimbeni kungenzeka kube kwenele, kepha uma i-calcium iza noshukela, iyoba yize. Kungakho ngifuna ukuxwayisa wonke umuntu ukuthi i-calcium ebisini olunoshukela ayithathwa emzimbeni njengoba kufanele, kodwa, inyusa nengozi yokuba nesifo esinjenge-rickets, kanye nezinye izifo ezihambisana nokushoda kwe-calcium.
Ukuze i-metabolism ne-oxidation kashukela kwenzeke kahle, ukuba khona kwe-calcium emzimbeni kuyadingeka, futhi ngenxa yokuthi akukho minerali kushukela, i-calcium iqala ukubolekwa ngqo emathanjeni. Isizathu sokukhula kwesifo esifana namathambo, kanye nezifo zamazinyo kanye nokwenza buthaka kwamathambo, kusobala, ukuntuleka kwe-calcium emzimbeni. Isifo esifana nama-rickets singaba yingxenye yokusetshenziswa ngokweqile koshukela omhlophe.
Ushukela wehlisa amandla amasosha omzimba ngezikhathi eziyi-17! Ushukela omningi egazini lethu, buthaka izivikeli mzimba. Kungani
Inganekwane 1: ushukela kufanele uqedwe ngokuphelele ekudleni.
Kungekudala kakhulu, bengigibela isitimela futhi ngifunda incwadi ekhuluma ngomphakathi wabantu abawushiya ngokuphelele ushukela futhi ngaluleka wonke umuntu ukuba alandele isibonelo sabo. Endleleni ebuyayo, iphephandaba elinesihloko liwele ezandleni zami: "Odokotela basePoland bakufakazisile ukuthi ukuntuleka koshukela ekudleni kuyingozi kakhulu ebantwini." "Uhlobo oluthile lokukhubazeka," ngacabanga, futhi ngibhala phansi iphephandaba, ngaqala ukuqoqa imininingwane ngenkinga yemiphumela kashukela emzimbeni wethu.
Kungani sizithanda kangaka lezi molekyuli ezinoshukela
Akulungile ukukholelwa ukuthi umuntu waqala ukudla ushukela ekudleni. Njengokuthi, ushukela wabonakala emhlabeni ngokuthengiswa kwamahhala, lapho-ke itiye alizange libe itiye ngaphandle kwalo, kanti amabhele nalo amnandi futhi ancipha. Umuntu-ke wayejwayela impilo emnandi.
Cha, umzimba womuntu udinga ushukela kusukela ekuzalweni. Ushukela kithi uwumkhiqizo hhayi wenjabulo ye-gastronomic kuphela, kodwa futhi nesidingo somzimba, yingakho.
IGlucose (ushukela) inika umuzwa wokugcwala.
IGlucose ngumhlinzeki osheshayo wamandla abalulekile kumuntu: ngomsebenzi wobuchopho, uhlelo lwezinzwa olungemuva, amangqamuzana abomvu egazi.
I-glucose ivuselela ukukhiqizwa.
I-Serotonin yinto ekhethekile ethinta amaseli ayizigidi ezingama-40 ezingxenye ezahlukahlukene zobuchopho ezibhekene nemizwa, umsebenzi wobulili, ukulala, inkumbulo, ikhono lokufunda, i-thermoregulation, isifiso sokudla, njll. Uma umzimba untula i-serotonin, khona-ke umuntu uyabona: ukungahambi kahle, ukukhathazeka okukhuphukayo, ukulahlekelwa amandla, ukuphazamiseka, ukungabi nandaba nabobulili obuhlukile nokucindezelwa.
Ushukela wondla ubuchopho. Ngaphandle kwawo, ngeke akwazi ukusebenza ngokugcwele. Khumbula ukuthi unyoko walifaka kanjani ibha letshokolethi esikhwameni sakho ukuze lihlole ukukusiza ukuxazulula izinkinga kangcono?
Lapho nje ubuchopho buzwa ukuntuleka kweglucose, kunikeza isibonakaliso sokuthi umzimba udinga ushukela, futhi ngokomzimba ngalesi sikhathi sizwa ukwazi okufiphele. Lokhu kungenxa yokuthi ama-lobes angaphambili obuchopho abhekene nomsebenzi wengqondo womuntu futhi asabele ngokunamandla ekushoneni kweglucose. Kepha lapho nje ushukela engena egazini, uphawu lwendlala luyama.
Ikuphi imilenze evela inganekwane yokuthi ushukela kufanele ungafakwa ekudleni?
Iqiniso ngukuthi indoda yanamuhla isebenzisa amandla amancane kakhulu. Lokhu kungenxa yempilo yokuhlala nokuhlala phansi. I-Sucrose ngokwayo iyi-carbohydrate esheshayo eyenza ukukhiqizwa kwe-insulin futhi ngokushesha iphakamise amazinga eglucose. Kungakho ushukela ubhekwa njengeyona ndlela elula yokuthola amandla, kanti nemikhiqizo equkethe ushukela ithandwa kakhulu.
Kepha kukhona okubalulekile "kodwa." Amazinga kashukela wegazi abangelwa ama-carbohydrate asheshayo ehla ngokushesha nje, futhi ngokushesha indlala iyabuya, ephoqa izinyo elimnandi ukuba lidle okungaphezulu kwalokho okudingekile. Ngenxa yalokhu, ushukela (ushukela) ongena emzimbeni awunaso isikhathi sokuchitha, futhi ushukela owedlulele egazini uqala ukubhubhisa ungqimba olugudla izindonga zemithambo yegazi.
Ama-carbohydrate asheshayo awatholakali kumaswidi kuphela, kodwa futhi nasezithelo, imifino nemikhiqizo yobisi. Imikhiqizo yeflishi, ama-chip kanye nama-fries ama-french aqukethe ama-carbohydrate, okuthi uma edakiwe, ahlukane noshukela olula, okuholela ekushintshashintsheni okufanayo kushukela wegazi njengokudla okumnandi. Ushukela ungaphinde ufihlwe ku-ketchup, isoso se-barbecue, isoso le-spaghetti ngisho nokugqokwa kwesaladi.
Ezinye izehlakalo ziba ngokulandelayo: umuntu udla amaswidi ngokwengeziwe, lokhu kugcina amakhalori wesikhathi esizayo angenaso isikhathi sokusebenzisa. Ngakho-ke sifike emsukeni weqiniso ushukela wobubi: ukusetshenziswa kwe ushukela emithanjeni eyeqisayo kanye nokuzivocavoca okuphansi okuholela, hhayi ushukela uqobo. Ngakho-ke, amahlebezi aqala ukusakazeka ukuthi ushukela uyisitha esikhulu sezempilo nokuthi kufanele ushiywe ngokuphelele futhi ungabandakanywa ngokuphelele kumenyu enempilo yansuku zonke.
Akuwenzi mqondo ukuzama ukukhipha ushukela ekudleni, futhi ufake lomkhiqizo njengehlazo. Udinga nje ukwazi isilinganiso sakho futhi ubheke ngokucophelela ushukela ofihliwe okufihlwe ekudleni okwenziwe ngomumo, ngenxa yalokho sigcina sinoshukela omningi ngaphezu kokudingwa ngumzimba wethu.
Inganekwane 2: ushukela onsundu unempilo futhi ungaphansi kilojoule kunoshukela ojwayelekile
Muva nje, ushukela onsundu usudume kakhulu. Izazi zezokondla zithi ngokungananazi ukuthi iqukethe izakhi ezidingakalayo ezinhlelweni zemizwa nenhliziyo kunashukela we-beet acwengekile, futhi abakhiqizi bakhuthaza ngenkuthalo abaqaphi besisindo ukuthi bathenge ushukela onsundu, ngoba kuyisithuthi esisheshayo futhi kuthiwa akunjalo uphenduka abe ngamafutha emzimbeni.
Uma usakholelwa kuzindlela zokuphilisa ushukela onsundu, ngifuna ukukudumaza: ngokwezimpawu zabo, zombili izinhlobo zoshukela, ibhungane kanye noshukela womoba, azihlukile kakhulu komunye nomunye. Ushukela onsundu ulula njenge-carbohydrate njengoshukela omhlophe ojwayelekile, futhi umunwa ngokushesha ngumzimba bese ugcinwa ngokushesha endaweni yedepho enamafutha. Futhi kilojoule kushukela onsundu kukhulu kakhulu kunokumhlophe:
100 g kashukela onsundu - 413 kcal
I-100 g kashukela omhlophe - 409 kcal
Kepha ngesimo sinye: uma ushukela owuthengile empeleni unoshukela omoba ofanayo ongachazwanga, futhi hhayi inkohliso, ngoba akuyona yonke ushukela onsundu obizwa ngokuthi ushukela womoba. Esikhathini esingengakanani esidlule, ucwaningo nedatha evela eRospotrebnadzor kukhombisile ukuthi awukho kangako ushukela womoba kakhulu ezitolo ezifuywayo nokuthi iningi lamashalofu “ashukela” asuphamakethe ushukela onemibala emhlophe.
Khumbula: ushukela womoba awunakubiza. Uma ubona ukuthi intengo yayo iseduze nezindleko zemikhiqizo ejwayelekile ehlungisiwe, kusho ukuthi unomkhiqizo onamathiselwe abakhiqizi abangathembekile.
Ukuqonda izintengo ezinjalo kulula kakhulu. Ushukela kufanele ucutshungulwe kungakapheli amahora angama-24 usikiwe, awubekezeleli ukugcinwa, futhi lena yimali. Ushukela womoba ukhiqizwa phesheya, eRussia ungafakwa kahle kakhulu emaphaketheni, futhi lokhu futhi kuyizindleko ezinkulu. Yebo, ngeke ithengiswe ngentengo efanayo noshukela we-beet.
Ngakho-ke, sakhipha phansi inganekwane yokuthi ushukela onsundu uwumkhiqizo wokudla. Kodwa-ke, umuntu angeke ehluleke ukuvuma ukuthi ushukela womoba oqonde ngempela unempilo kakhulu kunoshukela ojwayelekile we-beet ngenxa yokutholwa okukuwo. Futhi uma ungakwazi ukuziphika ushukela omncane ngetiye noma ngekhofi, okungenani zama ukulenza ikhefu lakho elimnandi lingabi yingozi futhi libe nephunga elikhudlwana ngoshukela wangempela womoba, kunokukhohlisa kwemibala okushibhile.
Phawula ngendatshana ethi "Ungadla ushukela ongakanani ngosuku? Izinganekwane ezi-2 mayelana noshukela, umoba nokujwayelekile"
Ekuseni ePyaterka ngithole ushukela othakazelisa kangaka onesinamoni ngezicucu ze-curly. Izithombe ezisebhokisini zisesimweni seswidi :), kepha ngendlela, muhle kakhulu: Ungasibeka ekhofi, ngokwesibonelo noma ngetiye esikhundleni samaswidi :) Zivele zincibilike emlonyeni wakho, zishiya isinamoni ngemuva. Ukubaluleka 69 re. Njengebhonasi, ibhokisi elimhlophe liza njengesipho. Futhi ngakhumbula ikhathuni lezingane elidala elikhazimulayo mayelana ne-imp # 13 :) "Ingabe ufuna ushukela, eh?"
Mantombazane, futhi ubani othatha ushukela ekubhaka ini? Futhi-ke sekuyisikhathi sezinsuku zokuzalwa emndenini, ngivame ukupheka amakhekhe, futhi kunoshukela omningi yonke indawo lapho sengivele sengisaba okhalweni lomndeni wami :)
Nginoju lokuthile okuncane, njengamakhekhe, kepha uma unokuningi kwalo) yize ngikuzwile ukuthi akufanele ungeze uju ekubhaka, ngoba alunakushiswa kakhulu, kwakhiwa izinto eziyingozi.
Ngithatha i-Prebiosvit Fibre, unama-prebiotic, ane-inulin (njengakwi-chicory), ngaphandle kokunambitha nokukhululekile. Ngeke ngasho lutho ngokunye, kuze kube manje Sengizame le kuphela, kunenqwaba yezomnotho, angazi ukuthi ngizoqeda nini)
Lapho sekusele amasonto ambalwa ngaphambi koNyaka oMusha, imicabango iqala ukushesha iphuma komunye umbono ngezipho eziseduze komunye. Ushokoledi osezingeni eliphakeme uyisipho sendabuko sanoma yiliphi iholide, manje kunezindlela zokwenziwa - ezizuzisa kakhulu ngokwasemzimbeni nangomphefumlo. Ukusiza abantu abakhubazekile abakuthola kunzima ukuthola umsebenzi akudingeki eholidini kuphela, kodwa manje ungakwenza lokhu ngoku-oda ushokoledi wemvelo njengesipho kubangane, kothisha, nakulabo esisebenza nabo. Yini ushokoledi ku Chocolate uju kuju.
Ucwaningo lweCenter for Disease Control and Prevention lukhombisile ukuthi umzimba womuntu uqukethe amakhemikhali angama-212. Phakathi kwazo kukhona ama-acrylamide akhiwa ngesikhathi sokuthambisa noma ngokubhaka ukudla, ama-phenols ezemvelo, izinto ezenziwe ngumbala ezisetshenziselwa ukwenza i-cookware enganamatheli, i-compact organic compounds evela kumakhemikhali wasendlini, izimonyo nopende. Ziqongelela izicubu ze-adipose, isibindi nezinso. Ngaphandle kokuhlanzwa noma, njengoba ibizwa nangokuthi, ukukhipha izidumbu.
Impikiswano ebukhali ibilokhu izungeza isihloko sokudla okufanele isikhathi esingaphezu konyaka. Izazi zokudla kanye nezintatheli zishintshana zisola zonke izono ezifayo ngamanoni, ama-carbohydrate, ushukela, gluten ... Uhlu luyaqhubeka njalo.Lesi sihloko siba buhlungu ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokudla kwengane. Siyaqonda izinganekwane ezidumile. Ukudla kukagogo. Cishe wonke umuntu ukhumbula lezo zikhathi lapho ukutholwa kwesisindo kwengane kuthathwa njengezinkomba ezinhle kakhulu. Ababelethi bethu bathaba ngokweqiniso.
Kunoma iyiphi iresiphi, uju lungathathelwa indawo ngoshukela - umoba noma ushukela ojwayelekile (oshisiwe). Inkinga ukuthi inhlama ye-gingerbread, empeleni, akuyona eyomntwana oyigulisi, lapho, ngaphezu koshukela, nezinongo. futhi uma uthatha uju noshukela bese ususa izinongo - kuzovele sekukhona.
Ochwepheshe be-analogue yomhlaba wezwe laseRussia bazithela phezu kokunqoba wena - umqeqeshi wokuzilolonga u-Irina Turchinskaya, isazi sezempilo u-Yulia Bastrigina, izazi zokusebenza kwengqondo u-Andrei Kukharenko no-Irina Leonova - bahlanganyele izimfihlo zabo namathiphu asebenzayo. Mayelana nezizathu zokuthola isisindo u-Irina Leonova: Uma ingane ebuntwaneni ingafundiswanga ukubhekana nezimo ezicindezelayo, izinselelo zomhlaba wangaphandle ngokusetshenziswa kwemali okuncane kwamandla abalulekile, iba sengozini yokuthola ukuncika kokudla. Iqoqo lezinto ezinjalo lilodwa kakhulu. Kubaluleke kakhulu.
INDLELA YOKUQINISEKISA UKUTHENGA KWABANTWANA Bonke omama bafuna izingane zabo zingagcini ngokuqinile futhi zivame ukugula. Kepha amakhemikhali ngesimo samathebhulethi, amaconsi kanye nezifafaza ezivela ekhemisi angafuni ukugxisha ingane. Kungcono ukusebenzisa izindlela eziwusizo nezisebenzayo ezivela ku-pantry yemvelo. 1. Ukunikeza isiphuzo se-rosehip umhluzi iRosehip kungumpetha kokuqukethwe kuka-Vitamin C, kunganikezwa izingane kusukela eminyakeni yobudala emine. Kepha kufanele kukhunjulwe ukuthi lo mkhiqizo, osetshenziswa kakhulu ekugonyelweni, ususa i-potassium emzimbeni.
Lapho sithenga ithanga elikhulu eduze kweZaraisk, ngazibuza - Uyokwenzenjani ngakho? Phambilini, bengihlala ngithenga izingcezu ngekhilogremu, kodwa lapha. ezingaba ngu-10! Futhi, lapho kuqubuka i-inthanethi, ngithole iresiphi yekhekhe ngithanga! Iresiphi ayilalanga isikhathi eside (ngasendleleni, lapho ngipheka ama-10 kg, ngangivele ngiyitholile, ihamba kahle nathi), ngakho-ke kwadingeka futhi ngithenge iqatha likhekhe emakethe. Futhi ngakho-ke kwenzekeni! Ukupheka akunzima, akuthathi isikhathi esiningi. KAKHULU! :) I-Flour - 360g. Amafutha omifino -218.
Ngabe usacabanga ukuthi unganciphisa isisindo kuphela ngokuzikhathaza ngokudla futhi ulamba njalo? Khohlwa! Ungaphungula isisindo, ubhekane nemizwelo ekhululekile impela futhi ungaziphiki ucezu ... kahle, uma kungenjalo isinkwa, khona-ke omunye umkhiqizo. Udinga nje ukwazi ukuthi yikuphi ukudla nezitsha ezingakufaki amakhilogremu. Asikho isidingo sokudla iparsley eyodwa - emhlabeni kunezinye amakhalori aphansi, futhi, noma kunjalo, izinto ezilusizo nezihlwabusayo. Isobho leSuphu yindishi ewuketshezi enomsoco omncane kunoku.
Noma ungadingi ukwehlisa isisindo, kusengamele ukuqapha ukudla. Ukudla okufanele okufanele nsuku zonke kusiza ukugcina impilo kanye nezinga eliphakeme lamandla, ngaphezu kwalokho, kuthuthukisa kakhulu ikhwalithi yempilo. Imvamisa abantu bathenga ukudla okuthile, bapheke isonto lonke futhi badle ngokulinganayo. Sikucebisa ukuthi upheke izitsha ezahlukahlukene kusukela kusethi eyisisekelo yezinhlamvu, inyama, imifino bese wengeza imifino nezithelo kwimenyu yakho yansuku zonke. Ungakhohlwa ukuthi udinga ukuphuza.
Cha, noma ngabe ngizame kangakanani i-sweetener, angikwazi ukudla, kubonakala sengathi kunambitheka kabuhlungu. Futhi uma ufuna ukuzelapha wena, lapho-ke ngikhetha ukusebenzisa i- “phase 2” calorie blocker. Ungadla naye (ngaphandle kokweyisa ngokweqile, futhi) kepha ungabe usanamafutha.
Ngayeka ukusebenzisa izikhala zikashukela. Ngidla ushukela ojwayelekile - kancane, noma umhlanga.
Ngibuke kafushane izolo ngoshukela womhlanga onsundu - ngamafuphi, umsuka ongaziwa (okungukuthi, ungaba ngumhlanga, noma mhlawumbe ushukela ojwayelekile we-beet), okuthi nje kuhlanganiswe noshukela womoba, okungukuthi, izinzuzo zalolo shukela.
Izolo ngike ngabheka kafushane ngoshukela womhlanga onsundu - ngamafuphi, umsuka ongaziwa (okungukuthi, ungaba ngumhlanga, noma mhlawumbe ushukela ojwayelekile we-beet), okuthi nje kugcotshwe umquba womhlanga, okungukuthi, izinzuzo zalolo ushukela, malini ejwayelekile, intengo iphindwe kaningi.
Kepha lapho ingane ifafazwa ngezizathu ezingenakuphikwa, udokotela wezokwelapha weluleka ukuthi, njengenye yezinto ezisencwadini yokudla ye-hypoallergenic, ukuthi athathe ushukela ojwayelekile ngoshukela womoba noma ushukela we-fructose. 1 inkomishi ngosuku kungenzeka, kodwa hhayi okuningi.
Esikhundleni sikashukela ojwayelekile, i-fructose, ushukela womoba. Futhi ungazama konke okunye okuncane.Udokotela ungitshele ukuthi i-caramel kungenzeka, ushukela, amakhukhi (ngifunde kwenye indawo ukuthi amakhukhi noma ama-buns angaba ngu-150g ngosuku), ujamu nawo ungaba.
Ngidla futhi ngiphuza ngokuphelele konke okukhulelwe nangaphambi kokukhulelwa. I-IMHO, ingane kufanele yamukele konke ngobisi lukamama, futhi uma kungekho lutho, bese uqala ukondla, khona-ke kuzoba nokungahambisani nakho konke. Ngaphezu kwalokho, cishe izinyanga ezintathu, ngadla amakhekhe ngamanani angenakulungiswa, bengifuna nje, futhi yikho
Zama kancane kancane, kepha hhayi konke ngasikhathi sinye, ukubona ukusabela. Ushukela, ujamu ovela kumajikijolo / izithelo ezingalunganga, ushokoledi omuhle ngaphandle kwezithasiselo "E" kungenzeka. AmaMarshmallows nama-marshmallows, ngokusho kwe-GOST, enziwe ngaphandle kwemibala yokufakelwa, ukunambitheka, iziqholo nazo kungenzeka.
Kungani kungcono kunokujwayelekile? nsundu nomhlanga kuyinto efanayo? Kunombono oyiphutha mayelana noshukela onsundu ukuthi umunca umzimba kancane, ngakho-ke awunakubangela ukweqile ngokweqile.
akukho okuhle. intombi yakhe yasebenza eNgilandi - ukukhiqizwa, okuhambisana nokukhiqizwa kashukela. kafushane onsundu yilokho okusala ngemuva kokumhlophe. ngokuvamile - i-nifiga iyasebenziseka futhi asikho isidingo sayo, kepha ukukhangisa kuyo kuhle.
Kubukeka sengathi izinhlamvu zethu zokunambitha sezivumelanise nesifiso sokufisa ushukela, futhi uma ukudla kwethu bekungaphunguliswa yiwo, kuba yinto engemnandi kakhulu kubantu abaningi. Kodwa-ke, kunezindaba ezinhle: izinambuzane zokunambitha zingakwazi ukuzivumelanisa nezimo, ezingasisiza ukuba sisuse isifiso esiningi sokudla ushukela omkhulu kangako, kodwa kanjani? Funda ukuze ufunde konke mayelana nokunciphisa ushukela nokuthi ungadla ushukela ongakanani ngosuku ukuze ube nempilo efanelekile.
Mangakhi amagremu kashukela angaqedwa ngosuku
Mangaki wezipuni kashukela ezingadliwa abesilisa nabesifazane abadala? uthi:
isimo soshukela ngosuku kwabesifazane abaningi - akukho ngaphezu kwama-100 kilojoule ngosuku okufanele aqhamuke ushukela (amathisipuni ayisithupha noma amagremu angama-20),
isimo sikashukela ngosuku emadodeni amaningi - kungabi ngaphezu kwama-kilojoule ayi-150 ngosuku ushukela okufanele atholwe (cishe amathisipuni ayisishiyagalolunye noma amagremu angama-36).
Mangakhi amagremu kashukela ku-isipuni - 1 isipuni esingu-4 amagremu kashukela.
Mangakhi amagremu kashukela epuni - 1 isipuni silingana nezipuni ezi-3 futhi silingana namagremu ayi-12 kashukela.
Amagremu angama-50 kashukela - Izipuni ezingaphezu kuka-4.
Amagremu ayi-100 kashukela - Izipuni ezimbalwa ezingaphezu kwe-8.
Engilazini yejusi yewolintshi (240 ml) - Uqukethe amathisipuni ayi-5.5 kashukela, ongaphezu kwama-20 amagremu.
Lokhu kungakho kunconywa amawolintshi wonke, kunejusi lewolintshi. Enye inketho - thela ujusi ngamanzi ayi-50/50, kuyilapho kungafanele uphuze ngaphezu kwe-120-180 ml isiyonke. Futhi khumbula ukuthi ama-jusi neziphuzo eziningi ezenziwe efektri aqukethe izinsiza ezimbili epakethe ngalinye. Ungazinaki ilebula.
Masingakhohlwa ngabantwana . Izingane zingakwenza ushukela ongakanani? Izingane akufanele zisebenzise ushukela omningi njengabantu abadala. Ukudla ushukela wezingane akufanele kweqe amathisipuni amathathu ngosuku, okungama-gramu ayi-12. Ubuwazi ukuthi isitsha esisodwa sebhulakufesi esisheshayo soshukela siqukethe amathisipuni kashukela angaphezu kuka-3.75? Lokhu kungaphezu kwesamba esiphakanyisiwe sesibonelelo sansuku zonke sezingane. Manje uyazi ukuthi kungani amakhefu amakhefu amnandi amaningi e-khekhe engeyona isinqumo esihle kuwo wonke umuntu.
Manje usunomuzwa wokuthi mangakhi amagremu kashukela ngosuku angaba, kepha ukulandela kanjani ukusetshenziswa kwawo? Indlela engcono kakhulu ukugcina incwadi yezindaba. Kunama-trackers amaningi ku-inthanethi ongawasebenzisa, futhi asiza kakhulu ezimweni lapho ilebula ingenalo ulwazi mayelana nezakhi zomsoco zomkhiqizo noma lapho kudliwa konke ukudla okufana nezithelo ezintsha.
Ake sibheke ukuthi ushukela uyini, ungakanani ushukela ongawudla ngosuku, nokuthi yikuphi ukusetshenziswa kwawo okweqisayo. Ngokusho Inhlangano Yenhliziyo YaseMelika , ekudleni kwethu kunezinhlobo ezimbili zikashukela:
Ushukela wemvelo ovela ekudleni okufana nezithelo nemifino.
Ushukela ongezekile kanye noswidi wokufakelwa, njengemichilo emincane eluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, nopinki otholakala kwikhawunta yekhofi, ushukela omhlophe, ushukela onsundu, futhi noshukela okhiqizwe amakhemikhali, njengoshukela omkhulu we-fructose. Lawo ushukela owenziwe efektri yizithako ezitholakala ekudleni okufana neziphuzo ezithambile, iziphuzo zezithelo, amaswidi, amakhekhe, amakhukhi, u-ayisikhilimu, iyogathi enoshukela, waffles, izimpahla ezibhakiwe, nezinhlamvu.
Amanye amagama ajwayelekile kashukela ongeziwe noma imikhiqizo engeziwe kashukela yile:
ujusi wezithelo ugxila
isiraphu yommbila ophezulu we-fructose
uju (bheka. Ukulimala kwezinyosi - ngabe kukuphi lapho uju luyingozi?
ama-molecule woshukela aphela ku "oz" (dextrose, fructose, ushukela, i-lactose, umhlaza wamabele, i-sucrose)
Manje njengoba usuwazi ushukela ongeziwe, kuthiwani ngalabo abavela emithonjeni yemvelo enjengezithelo? Ngabe bayabhekwa? Well, uhlobo. Yebo, lokhu kungukukhetha okungcono kakhulu, kepha okunye ukudla kuqukethe ushukela omningi, ngakho-ke usadinga ukugcina ukusetshenziswa kwawo kulawulwa - ikakhulukazi uma unesifo sikashukela mellitus noma ezinye izifo ezithinta ushukela.
Kungcono ukudla izithelo zonke, kepha ukukhetha izithelo ezifanele kubalulekile. Usawidi ophakathi nendawo uqukethe cishe amagremu ayi-12 kashukela wemvelo. Isitsha esincane sama-sitrobheli siqukethe cishe ingxenye yalokho. Izithelo ezomile nezithelo ezigcwele ziqukethe cishe inani elilinganayo lamakhalori noshukela, kodwa izithelo ezomisiwe zilahlekelwa yizinto eziningi ezizuzisayo ngenxa yokulahleka kwamanzi ngesikhathi senqubo yokuna.
Amawolintshi kanye nama-sitrobheli aphansi kilojoule futhi aphezulu kwizakhi zomzimba. Zinama-gramu amathathu we-fiber, i-100% yokudla okunconywayo nsuku zonke kwe-Vitamin C, i-folic acid, i-potassium nezinye izinto.
Uma ukhetha ibhodlela elingu-500 ml likasawoti elinamawolintshi, yilokhu okuthola esikhundleni salokho:
Amagremu angama-60 kashukela ongeziwe
Yikuphi ukukhetha okuzwakala kukhanga kakhulu? I-Soda noma i-orange enama-sitrobheli?
Ngaphandle kokubakhona koshukela ekudleni kwemvelo, lokhu kuyindlela enhle ngoba uqukethe i-fructose, enhle ukukhiqizwa kwamandla. Lapho ushukela ukhishwa ekudleni, akukho ntambo yokudla esele, kanti nobunzima bezakhamzimba buncishiswa kakhulu. Zama ukudla ukudla kwe-organic - kanti cha, akuyona iCoca-Cola.
Umphakathi wokukhuluphala ibika ukuthi emashumini amathathu eminyaka adlule, ukusetshenziswa koshukela kukhuphuke ngamaphesenti angaphezu kwangama-30. Ngo-1977, emazweni athuthukile, ukusetshenziswa koshukela kwangena cishe kilojoule angama-228 ngosuku, kepha ngonyaka we-2009 kuya ku-10 kuye kwafinyelela kuma-kilojoule angama-300, futhi manje sekungaba ngaphezulu, kanti nezingane zadla kakhulu. Lawo mashukela, anezelwa amasoso, izinkwa kanye nepasta, ngaphezu kwenqwaba yamaswidi, iziphuzo nezinhlamvu zokudla kwasekuseni, engeza amakhalori amaningi ekudleni futhi abangela ukuvuvukala, ukugula nokunye okuningi. Yize lokhu kungaholela ekwandeni kwesikhashana kwamandla, kunciphisa kakhulu ukuthathwa kwezakhi ezibalulekile emzimbeni.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukunciphisa ukunciphisa ushukela kungenza umehluko omkhulu empilweni yethu, ikakhulukazi maqondana nesifo sikashukela sohlobo 2 nokukhuluphala. Izishoshovu zamalungelo abantu ziphakamisa ukuthi ngokusebenzisa umgomo wokuvinjelwa, ushukela ongezwe ekudleni ngabakhiqizi ungancishiswa ngesilinganiso samaphesenti ayi-1 ngonyaka, okunganciphisa ukukhuluphala ngo-1.7% kanye nezigameko zohlobo 2 lwesifo sikashukela ngamacala angama-21,7 kubantu abangu-100,000 iminyaka engu-20.
Izikhungo Zase-US Zokulawulwa Kwezifo Nokuzivikela ube nezibalo ezinemininingwane eminingi yokuthi abantu basebenzisa ushukela abangakanani:
Kusukela ngo-2011 kuya ku-14, abantu abasha baphuza amakhalori ayi-143, kanti abantu abadala baphuza amakhalori angama-145 kwiziphuzo ezinoshukela ezinekhabhoni.
Ukusetshenziswa kweziphuzo ezinjalo kuphezulu phakathi kwabafana, intsha noma intsha ehlala emindenini enemali ephansi.
Phakathi kwabantu abadala, ukusetshenziswa kweziphuzo ezinoshukela okune-carbonated kuphezulu phakathi kwamadoda, abantu abasha, noma abantu abadala abahola kancane.
Ungaba nesilinganiso sikashukela esiphansi kakhulu? Izingozi ushukela ophansi
Ushukela omncane ungakuholela ekujabuleni okukhulu, ikakhulukazi uma unesifo sikashukela. I-glucose ephansi yegazi, eyaziwa nangokuthi yi-hypoglycemia, ingenye yezinkinga ezivame kakhulu ezihambisana noshukela omncane wegazi, futhi ichazwa njengezinga le-glucose engaphansi kuka-3.86 mmol / L (70 mg / dl). Imvamisa lokhu kubangelwa ukuthatha imishanguzo, ukungondleki okwanele, noma uma umuntu engadlanga lutho isikhathi eside, ukuzivocavoca ngokweqile komzimba, kwesinye isikhathi notshwala.
Izimpawu zingafaka imizwa yokuthuthumela, ukujuluka, nokushaya kwenhliziyo okusheshayo. Lesi simo sivame ukuba mnene, kepha i-hypoglycemia enzima ingadala ukudideka, isimilo sokumelana, ukungazi noma ukubanjwa.
Ushukela omncane wegazi ungakhula kunoma yimuphi umuntu, futhi amasheke avamile angaba yindlela enhle yokulawula. Imvamisa yokuhlola iyahlukahluka, kepha abantu abaningi abanesifo sikashukela bavivinya ushukela wegazi labo ngaphambi kokudla kwasekuseni, kwasemini, kwakusihlwa, futhi ngaphambi kokulala. Uma usola ukuthi unezinkinga ngoshukela omncane wegazi, kufanele ubonane nodokotela ongakusiza ekugcineni ushukela wegazi ojwayelekile.
Izingozi ushukela wegazi ophakeme
Ukuntuleka koshukela kungadala i-hypoglycemia, kepha ukugqithisa kwayo kungaholela esimweni esaziwa ngokuthi yi-hyperglycemia. I-Hyperglycemia ingadala izinkinga ezinkulu, njengokuthi:
ukulimala kwezinzwa okubizwa ngokuthi yi-peripheral neuropathy
isifo sikashukela se-neuropathy
ukulimala kwemithambo yegazi ye-retinal - i-retinopathy yesifo sikashukela engadala ubumpumputhe
ukubanga noma ukugcwala kwamalensi
Izinkinga zomlenze ezibangelwa izinzwa ezilimele noma ukusakazeka okuhle
Izinkinga zamathambo kanye nokuhlangana
Izinkinga zesikhumba, kufaka phakathi ukutheleleka ngamagciwane, ukutheleleka ngefungus kanye namanxeba angapholi
ukutheleleka emazinyweni nasezinsini
Ngaphezu kwalokho, kunengozi enkulu kashukela wegazi ophakeme, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi ungadla ushukela ongakanani ngosuku.
1. Ushukela omningi ungadala izinkinga zenhliziyo.
Ngokusho Jama Kwezinye izimo, cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yamakhalori adliwayo ngosuku avela kushukela. Lokhu inani elihle likashukela! In Impilo kazwelonke futhi Ucwaningo Lokuhlolwa Kwesondlo imininingwane iqoqwe esisize ekuboneni izinkinga ngoshukela omningi. Imiphumela ikhombisa ukuthi iningi labantu abadala lidla ushukela ongeziwe kunalokho okunconyelwe ukudla okunempilo, okuholela ekufeni okuthe xaxa kwesifo senhliziyo.
2. Ushukela ungadala isifo sikashukela, ukukhuluphala kanye ne-metabolic syndrome
Isifo sikashukela i-mellitus mhlawumbe ngesinye sezifo ezivame kakhulu ezihambisana nokusetshenziswa ushukela omningi, ukudla kwase fektri, ukudla okusheshayo kanye nendlela yokuphila yokuhlala. Lapho sisebenzisa ushukela omningi, isibindi senza konke okusemandleni ukuguqula ushukela sibe amandla, kepha asikwazi ukuguqula umkhiqizo omningi kakhulu. Njengoba isibindi singakwazi ukufaka wonke ushukela ongena emzimbeni, ngenxa yokungezwani kwawo, ukumelana ne-insulin kuqala ukukhula, okungaholela ekutheni kube nesifo se-metabolic syndrome.
3. Ushukela omningi ungalimaza amazinyo akho.
Yebo, kuyiqiniso ukuthi ushukela omningi ungakwenza uvakashele udokotela wamazinyo. Ngokusho I-American Dietetic Association futhi ubike Umbiko weSurgeon General Oral Health eMelika Okudingayo kuyithinta kakhulu impilo yomlomo wakho - kufaka amazinyo nezinsini. Ushukela omningi ungadala ukukhula kwamagciwane, okuholela ekubhujisweni nasekuthelelekeni kwezicubu namathambo aseduze.
4. Ushukela ungalimaza isibindi sakho
Ngokusho Inhlangano Yesifo Sikashukela yaseMelika Ukudla ushukela okuphezulu kungadala izinkinga ngesibindi sakho. Lapho udla ushukela olulinganiselwe nganoma yiluphi uhlobo, lugcinwa esibindini njengoshukela kuze kube yilapho umzimba uludinga ukuze usebenze kahle wezitho ezahlukahlukene, njengobuchopho. Kepha uma kungena ushukela omningi, isibindi asikwazi ukukugcina konke. Kwenzekani? Isibindi sigcwele ngokweqile, ngakho ushukela uphenduka abe ngamafutha.
Yize ushukela ovela emithonjeni yemvelo, njengezithelo, ungcono kakhulu kunenguqulo ehlanjululwayo yokufakelwa, isibindi awuboni umehluko. Ngaphezu kwalokho, isifo esaziwa ngokuthi isifo sesibindi esingama-non-alcoholic singadalwa ngokusetshenziswa ngokweqile kweziphuzo ezithambile - sibangela ukumelana ne-insulin futhi sandisa ukucindezela kwe-oxidative esibindini. Ngakolunye uhlangothi, uma umzimba ungatholi ushukela owanele, kuzosebenzisa amafutha ukukhiqiza amandla. Lesi simo sibizwa nge- ketosis.
5. Ushukela ungadala umdlavuza
Ukulimala ushukela emzimbeni womuntu nakho kulele ekutheni ukusetshenziswa kwawo ngokweqile kungadala umdlavuza . Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukukhuluphala ngokweqile kungahlotshaniswa nokufa kusuka kumakhanse amaningi ngoba uhlelo lokukhula njenge-insulin lungakhuphula ukukhula kwamangqamuzana wesimila. Ngaphezu kwalokho, i-metabolic syndrome, ehlanganiswe nokuvuvukala okungamahlalakhona, ingadala ukukhula kwe-tumor kanye nokuqhubekela phambili.
Ngokusho kocwaningo olushicilelwe ku Ezokwelapha Umdlavuza Ohlanganayo , kunobudlelwano phakathi kwe-insulin nomphumela wayo kumdlavuza wekoloni, i-Prostate, i-pancreas kanye nebele. Kubukeka sengathi ushukela ungaphazamisa ngisho nokwelashwa komdlavuza, okwenza ungasebenzi kahle. Ngokudla izakhamzimba ezengeziwe noshukela omncane, ukuvivinya umzimba njalo futhi wehlise amazinga okucindezela, unganciphisa ingozi yokuthola umdlavuza nazo zonke izinhlobo zezimila.
Kepha kukhona uhlangothi oluqondile - ukusetshenziswa kweshukela inani elifanele kungasiza abasubathi. Yize kungenxa yolwazi lwethu ukuthi ama-carbohydrate anjengobhanana angasiza ekuthuthukiseni ukusebenza kwabasubathi futhi alulame, kubonakala kunendlela ebukhali yokuhlinzeka ukusebenza nokuvuselela ukwedlula ushukela.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ezinye izinhlobo zikashukela zingcono kunezinye. Izifundo zahlolwa ngemuva kokubhukuda okwathatha imizuzu engama-90 noma isikhathi sokuzila samahora angama-24. Imiphumela yakhombisa ukuthi i-fructose akuyona inketho enhle yokuphindukuzalwa, kepha ngokusetshenziswa kwe-glucose ne-fructose, i-glycogen ibuyiselwa ngokushesha esibindini, ezingasiza ukubuyisela izicubu zomzimba ezigcwele futhi zenze ukuba umsubathi alungele i -out elandelayo.
Ukudla okufihle ushukela
Ukudla okuthile kusobala ukuthi kunoshukela, kepha ekudleni okuningi okuqukethwe ushukela kungenzeka kungabonakali. Uma ufuna ukwazi ukuthi yikuphi ukudla okuqukethe ushukela ocashile, funda amalebula.
Imikhiqizo Ephezulu Ushukela:
ezemidlalo neziphuzo zekhabhoni
namakhekhe anjengamakhekhe, ophaya, amakhekhe, ama-donuts, njll.
imigoqo yamaprotheni namandla
I-ketchup, isoso se-barbecue namanye amasoso
amajusi wezithelo nezinye iziphuzo ezinjengamanzi anamandla
isinkwa nemikhiqizo yokubhaka
Unganciphisa kanjani ushukela
Ukunciphisa ukubamba ushukela akunzima njengoba ucabanga, kepha uma ungumlutha, kungadinga umkhuba othile nokuzibophezela, njengolunye ushintsho. Inhlangano Yenhliziyo YaseMelika ihlanganyela nezeluleko ezithile zokuthi unganciphisa kanjani ukungena kwakho ushukela. Prakthiza le mibono njalo, futhi ngesikhathi esifushane kakhulu uzokwehlisa ushukela wakho bese wehlisa nengozi yakho yokuba nesifo sikashukela, isifo senhliziyo, isifo se-metabolic kanye nokukhuluphala.
Susa ushukela, isiraphu, uju kanye nokholishi ekhikhini nasetafuleni ekhishini.
Uma ufaka ushukela ekhofi, itiye, okusanhlamvu, ama-pancake, njll, ukunciphisa ukusetshenziswa kwawo. Ukuze uqalise, engeza kuphela isigamu semali ojwayele ukuyisebenzisa futhi, ngokuhamba kwesikhathi, unciphise ukusetshenziswa kwayo kakhulu. Futhi azikho izinhlayiya zokufakelwa!
Phuza amanzi esikhundleni seziphuzo ezinongiwe kanye namajusi.
Thenga izithelo ezintsha esikhundleni sezithelo ezikheniwe, ikakhulukazi kumasiraphu.
Esikhundleni sokufaka ushukela esidlweni sakho sasekuseni ekuseni, sebenzisa ubhanana omusha noma amajikijolo.
Lapho ubhaka, yehlisa ushukela ngengxenye eyodwa kwezintathu. Zama nje! Ngeke nje uqaphele.
Zama ukusebenzisa izinongo ezifana ne-ginger, isinamoni noma i-nutmeg, esikhundleni sikashukela.
Zama ukwengeza i-applesauce engafakiwe esikhundleni sikashukela lapho ubhaka.
Cabanga ukusebenzisa i-stevia, kepha ngokulinganisa. Muhle kakhulu, ngakho-ke awumdingi kakhulu.
Ukuqapha nemiphumela emibi
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, uma unesifo sikashukela noma unezimpawu ezibonisa ukuthi unesifo sikashukela, uma unezinkinga zenhliziyo, umdlavuza, noma yisiphi isifo, vele wenze isivumelwano nodokotela wakho. Ushukela, ngendlela, ungenza izinto zibe zimbi kakhulu. Ukuxilongwa okulungile bese ukudla okunempilo okugcwele izakhi kanye noshukela oncishisiwe kungaba nomphumela omuhle empilweni yakho.
Ngaphezu kwalokho, ushukela ungadala izinkinga zesibindi kanye nokukhuluphala. Udokotela wakho kanye nomondli wezempilo kungakusiza wenze ushintsho oluhle ekudleni kwakho ngokunciphisa ushukela futhi ungeze ukudla okune-izakhi zomzimba.
Imicabango yokugcina yokuthi ingakanani ushukela ongayisebenzisa ngosuku
Ushukela kukho konke - ngakho-ke umthengi uqaphela! Kungagwenywa ngokumane wenze ukukhetha okuhle. Ukudla okuningi akudingi ushukela ukunambitha okuhle. Zinike isikhathi sokufunda ukuthi ungapheka kanjani ngaphandle kwawo.
Ukupheka izimpahla ezibhakiwe nokunye ukudla ekhaya kungasiza ukwehlisa umthamo wakho ushukela. Thola izindlela zokupheka ezinoshukela omncane noma awunawo ushukela. Yize ekuqaleni kungabonakala kungahambi kahle uma unamathela kukho, ngemuva kwesikhashana uzozizwa ungcono kakhulu futhi uzoba uchwepheshe emkhakheni wokuthola ushukela ekudleni.
Mayelana nokudla ushukela nsuku zonke okufanele udle - Inhlangano Yenhliziyo YaseMelika incoma ukuthi iningi labesifazane lingazitholi kilojoule ezingaphezu kwekhulu ngosuku ushukela (amathisipuni ayisithupha noma amagremu angama-20) futhi lingabi ngaphezu kwama-kilojoule ayi-150 ngosuku kwabesilisa (cishe amathisipuni ayi-9 noma amagremu angama-36). Ungadliwa ushukela ongakanani ngosuku ngaphandle kokulimaza impilo - ngokuvamile, ushukela ongeziwe kufanele ungaphansi kwamaphesenti ayi-10 wokudla kwakho.
Abaningi bezwe isisho esithi: "Ushukela ngukufa okumhlophe." Lesi sitatimende asivelanga ngengozi, ngoba ushukela uqukethe amakhalori amaningi futhi uthinta kabi izinqubo ze-metabolic. Ukuningi ngokweqile ekudleni kuholela ekuzuzeni isisindo, kubangele ukukhuluphala, izinkinga zenhliziyo kanye nesifo sikashukela. Kepha iningi lisetshenziselwa kakhulu ukusebenzisa “okumnandi okumhlophe” kangangokuba abakwazi ukucabanga ngosuku olulodwa ngaphandle kwalo mkhiqizo.Ngakho-ke ungadla ushukela ongakanani ngosuku ngaphandle kokulimaza impilo yakho?
Ungadla ushukela ongakanani ngosuku?
Kuyadingeka ukuhlukanisa ngokucacile phakathi koshukela wemvelo noshukela wetafula, esingeza ekudleni. Ushukela wemvelo utholakala kuzithelo nemifino, akusiyo ingozi. Ngaphezu kwakho, izithelo ziqukethe amanzi, i-fiber, amavithamini kanye namaminerali. Lokhu kukuvumela ukuthi udle izithelo nemifino ngaphandle kokulimaza impilo.
Indoda nomfazi abadala abadala bangadla ushukela ongakanani ngosuku
Ushukela wethebula ubhekwa njengoyingozi, futhi kuyadingeka ukuzikhawulela kuwo. Nawa amagremu kashukela ngosuku ongawadla:
Izingane iminyaka engama-2-3 - 25 g noma i-5 tsp.
Izingane ezineminyaka engu-4-8 ubudala - 30 g noma 6 tsp.
Amantombazane aneminyaka engu-9-13 ubudala, abesifazane abadala kuneminyaka engama-50 - 40 g noma i-8 tsp.
Abafana abaneminyaka engu-9-13 ubudala, amantombazane aneminyaka engu-14-18 ubudala, abesifazane abaneminyaka engama-30-50 ubudala - ama-45 g noma ama-9 tsp.
Abesifazane abaneminyaka engu-19-30 ubudala, amadoda amadala kuneminyaka engama-50 - 50 g noma i-10 tsp.
Abesilisa abaneminyaka engama-30-50 ubudala - 55 g noma i-11 tsp.
Amadoda aneminyaka engu-19-30 ubudala - 60 g noma 12 tsp.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi imininingwane esetafuleni ingeyabantu bezempilo nabadala abangakhuluphele ngokweqile. Uma umuntu egula noma emkhulu ngokweqile, izinga lokudla ushukela kunqunywa ngawodwana.
Kungani ukudla ushukela omningi kuyingozi?
Uma usebenzisa ushukela njalo, ukungatheleleki kuncishiswa cishe izikhathi eziyi-17! Lokhu kuyabonakala ikakhulukazi ezinganeni. Izinyo elimnandi lihlushwa umkhuhlane imvamisa kakhulu kunalezo zingane ezidla ukudla okunempilo.
Ukuhlukumeza ushukela kuholela ekukhuluphiseni. Amaswidi adliwe afakwa ezinhlangothini, okhalweni, esiswini ngesimo sezingqimba ezinamafutha. Futhi uma usebenzisa amanoni noshukela, khona-ke umunca ngokushesha okukhulu. Kepha ukuhlanganiswa kwamafutha noshukela, ngokwesibonelo, kuthandeka ngamakhekhe amaningi amnandi no-ayisikhilimu.
Ushukela ubangela umuzwa wamanga wendlala. Ngokuhamba kwesikhathi, izinyo elimnandi liphelelwa amandla okudla
Ukwakheka kwamakhemikhali kashukela oshukela (ocolisisiwe) kuhluke kakhulu ekwakhekeni koshukela onsundu. Ushukela omhlophe uqukethe cishe ama-100% ama-carbohydrate, kuyilapho ushukela onsundu uqukethe amanani athile wokungahlanzeki, angahluka kakhulu ngokuya ngekhwalithi yemfuyo nokuphaka kokuhlanzwa kwayo. Ngakho-ke, sikunikeza itafula lokuqhathanisa nezinhlobo eziningana zoshukela. Ngenxa yakhe, uzoqonda ukuthi ushukela ungahluka kanjani.
Okokuqala, kumele kushiwo ukuthi izinzuzo nokulimala ushukela emzimbeni womuntu namanje akuqondakali ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi ngokoqobo kusasa uhlobo oluthile locwaningo lungenziwa oluphikisa konke okushiwo ososayensi banamuhla ngezingozi nangezinto eziwusizo zamakristali kashukela.
ifinyelela i-calcium emathanjeni, ngoba kuyikhalsiyamu esetshenziselwa ukwenza umthelela ongemuhle weshukela egazini Ph
Kumele kuqashelwe ukuthi zonke izinto "eziyingozi" kuhlu lwethu, ngaphandle kwalezi ezilandelayo, azikhathaleli ushukela omhlophe ocwengekile kuphela, kepha futhi onsundu awuzwiswanga. Ngoba isizathu esiyinhloko cishe sayo yonke imiphumela emibi yokudla ushukela okweqile komzimba ukwanda okubangelwa ushukela wegazi.
Kodwa-ke, ngasikhathi sinye, ushukela ongafakwanga ulimaza kakhulu umzimba, ngoba uqukethe inani elithile (kwesinye isikhathi ngisho nelibaluleke kakhulu) lamaminerali kanye namavithamini, anciphisa kakhulu umonakalo odalwa wukugcwala kweglucose. Ngaphezu kwalokho, izinzuzo nokulimala ushukela womoba kuvame ukulingana. Ngakho-ke, uma kungenzeka, thenga futhi udle ushukela ongafakwanga onsundu ngensalela ephezulu yokungcola kwe-Vitamin-mineral.
Ukusetshenziswa kwemikhiqizo ye-confectionery kuyinto ejwayelekile kwabesifazane nakwabesilisa, kepha kuqukethe ukugxila okukhulu koshukela (i-sucrose), okuthi ngesimo sayo esimsulwa kungalimaza umuntu, ngoba ngosuku kungadliwa kungabi ngaphezu kwesilinganiso esithile, kubalwe ngamagremu. Inkinga enkulu yalo mkhiqizo ukuthi ayinikezi lutho ngaphandle kwama-kilojoule ayisiphukuphuku, lapho kungekho zakhi ezilusizo, ngakho-ke i-metabolism iyahlupheka.
Kuyaqapheleka izinkinga umuntu anazo ngempilo ngenxa yokwehla ushukela nsuku zonke, ngoba uma uyisebenzisa ekudleni kwakho nsuku zonke, kuzoba yisizathu sokwehluleka kwezinqubo ze-metabolic. Ukwephulwa komsebenzi wabo kungaholela emiphumeleni eminingi, isibonelo, ukukhuluphala, isifo sikashukela kanye nezinkinga zokugaya ukudla kanye nohlelo lwenhliziyo.
Akuvamisile ukuthi kube lula ukubala ukuthi kungadliwa malini i-sucrose ngosuku, ngaphandle kokulimaza umzimba, ngoba nayo inezinhlobo zayo. Esimweni esinjalo, kufanele ufunde ukuqonda umehluko phakathi kweshukela elithengiwe esitolo nomlingani walo wemvelo, ongatholakala emifino, izithelo namajikijolo.
Ushukela omhlophe (ushukela obunjiwe) wenziwa ngaphansi kwezimo zezimboni, futhi awunakwenza lutho nge-sucrose yemvelo, equkethe amanzi nezakhi ezidingekayo ukuze umzimba usebenze kahle. Ngaphezu kwalokho, ilula kakhulu futhi igxile kangcono. Ngalesi sizathu, labo abafuna ukunciphisa umzimba kufanele bame e-analogue yemvelo.
Ukunqunywa umthamo nsuku zonke ushukela granured
Iminyaka eminingi, izikhungo eziningi bezilwela ifomula ngqo yesimo soshukela sansuku zonke, umuntu onempilo angazisebenzisa ngosuku ngaphandle kokulimaza impilo yakhe, futhi okwamanje:
Abesilisa - 37,5 gr. (Amathisipuni ayi-9), okulingana namakhalori ayi-150,
Abesifazane - 25 gr. (Amathisipuni ayi-6), alingana namakhalori ayi-100.
Ungaqonda kangcono lezi zinombolo usebenzisa isibonelo se-Coke can. Inamakhalori ayi-140, kuthi kuma-Snickers afanayo - ayi-120. Ngaphezu kwalokho, uma umuntu eyisidlali noma ehola indlela esebenzayo, khona-ke ngeke kumlimaze, ngoba bazoshiswa ngokushesha.
Kuyafuneka ukuthi uqaphele olunye uhlangothi lwemali, ngoba uma abantu benomsebenzi wokuhlala phansi nowokungasebenzi, bavame ukukhuluphala ngokweqile noma bhala uhlobo lwesifo sikashukela esingu-1-2, ngakho-ke udinga ukulahla ngokuphelele imikhiqizo equkethe ushukela omsulwa. Uma ufuna okuthile okufana nalokhu, khona-ke ungasebenzisa omunye wale mikhiqizo ngosuku, kepha hhayi ngaphezu kwezi-2 ngesonto.
Abantu abanamandla aphikelelayo kufanele balahle ngokuphelele imikhiqizo enjalo ecebile nge-sucrose yokufakelwa, ngoba noma imaphi amaswidi agcwele kuwo azoba nomthelela omubi emzimbeni. Kungcono ukufaka okunye ukudla okusetshenzisiwe, ama-khekhe nokudla okuningana okuhlukahlukene ngokudla okunempilo nokwendalo. Kulokhu, ungakhohlwa ukungasebenzi kahle kumetabolism futhi ujabulele impilo esesimweni esijabulisayo nesinempilo.
Ungakuyeka kanjani ukudla ukudla okugcwele ushukela wokufakelwa
Iningi labachwepheshe lithambekele ekukholelwe ukuthi iziphuzo nokudla okune ushukela, umlutha akukubi kunezidakamizwa. Ngalesi sizathu, abantu abaningi abakwazi ukuzibamba futhi baqhubeke nokudla ukudla okusheshayo, ama-sneaker ne-Coke.
Odokotela baphinde baqaphele ukuthi ukuhlukunyezwa kwale mikhiqizo isikhathi eside kanye nokuntuleka kwesifiso sokushintsha indlela abadla ngayo kungakhombisa ukuncika okuqinile ku-sucrose. Lesi simo sezinto sizothinta kabi izifo ezenzeka njengamanje, futhi ngesinye sezizathu zokuvela kwe-pathologies entsha.
Kungenzeka ukuphuma kulesi simo kuphela ngokushiya ngokuphelele imikhiqizo enenqwaba kashukela wokufakelwa futhi ngemuva kwenyanga yokudla okunjalo, ukuncika kuzoqala ukuncipha.
Ukuncishiswa kwe-self-saccharose ku-sucrose
Akuwona wonke umuntu ongakwenza lokhu ngaphandle kosizo lochwepheshe, kepha uma inqubo sele iqalile, khona-ke udinga ukulahla le mikhiqizo:
Ukusuka kunoma yikuphi iziphuzo ezimnandi, ngoba okuqukethwe ushukela okufakwayo kuphezulu impela. Kungcono ukuzikhawulela kumajusi wemvelo owenzelwe wona,
Ngaphezu kwalokho, udinga ukunciphisa inani le-confectionery ekudleni kwakho,
Konke ukubhaka okubhakiwe kanye nokubhaka kufanele kususwe ngokuphelele ekudleni, ngoba ngaphezu koshukela owenziwe nge-granured kukhona nenqwaba yama-carbohydrate asheshayo kuwo,
Kuyadingeka futhi ukwenqaba izithelo ezikheniwe kushukela isiraphu. Okuhlukile lapha kungaba ijamu le-fructose kuphela,
Ukudla okunamafutha amancane kuyingozi futhi ngoba abakhiqizi bengeza ukunambitheka kubo ngoshukela,
Kuyafuneka ukuthi uqaphele ukugxila kweshukela ezithelo ezomisiwe, nazo ezidinga ukulahlwa.
Okokuqala, kunenqubo yokukhohlisa isisu, ngokufaka okunye ukudla neziphuzo nabanye, kepha ngaphandle koshukela okwenziwe ngengqondo. Ukusuka koketshezi kungcono ukuphuza amanzi amsulwa ngaphandle kwama-sweeteners. Ngaphezu kwalokho, itiye elimnandi nekhofi nakho kungcono ukukugwema. Ungasusa ama-khekhe amnandi namaswidi ngezitsha ezinolamula, ujinja kanye nama-alimondi.
Uma ubheka kuqala, kubonakala sengathi kunzima ukuqamba kabusha isidlo sansuku zonke, kepha vele ufake umbuzo odingekile ku-Intanethi kanye namakhulu ezitsha ezimnandi ezinokugxila okuncane okuzovela emiphumeleni. Uma ungasenawo amandla okukhuthazelela ukubuyisela ushukela esikhundleni sawo, ungagxilisa ukhula, obhekwa njengophikisana nawo wemvelo, kodwa ulimaza umzimba omncane.
Ngokufanele, kufanele ungafaki ngokuphelele yonke imikhiqizo engakaqediwe kusuka kumenyu yakho. Isibonelo, esikhundleni samaswidi, ungadla izithelo eziningi kanye namajikijolo. Zingadliwa ngaphandle kwemikhawulo futhi kuzofanela ubheke ukuthi mangaki amakhalori akuzo, kodwa uma kumayelana nesifo sikashukela, konke ukudla kufanele kube kokulingene.
Kubantu abakhuluphele ngokweqile, ukwenqiwa kwemikhiqizo esekuqediwe akunakwenzeka futhi esimweni esinjalo kuzodingeka uzikhethele ngokucophelela, ufune inani lamakhalori nokwakheka emalebula. Kuyo, ushukela ubizwa ngokuhlukile, ngokwesibonelo, i-sucrose noma isiraphu.
Kuhle ukukhumbula umthetho obalulekile wokuthi kungcono ukungathengi imikhiqizo equkethe ushukela ekuqaleni kohlu, futhi nangaphezulu uma kunezinhlobo eziningana zoshukela.
Ngokwehlukana, kubalulekile ukuqaphela izifanekiselo zemvelo ze-sucrose, okungukuthi i-fructose, uju ne-agave, zilusizo kubantu abakhuluphele nabanesifo sikashukela.
Izinga lokudla ushukela liyinombolo elungisiwe futhi udinga ukuhambisana nayo lapho ubhala ukudla kwakho kosuku. Ngaphezu kwalokho, une-analogues yemvelo ephakeme kakhulu kumakhalori futhi ngeke ilimaze umzimba.
Isizinda esincane: ukudla noma ukungadli
Wenza ukudla neziphuzo kunciphe, nokuhlobisa i-powder okungekho isisindo okuhlobisa amakhekhe nama-khekhe nsuku zonke kudonsa abaningi abaphethwe yilesi sinqumo abazenqabele ngokwabo amaswidi ngenxa yesibalo esincane. Kungenzeka yini ukuthi uphile ngaphandle kwesiqeshana esicwengiweyo, futhi ingabe umzimba wethu udinga lo mkhiqizo?
Nomaphi lapho kungekho ushukela uiquitous - ushukela, futhi ekudleni okusheshayo, nakwimifino enezithelo. Futhi kwesinye isikhathi iyatholakala naku ... isoseji. Ungamangali: uhlu lwemikhiqizo, olufaka i-sweetener ethandwayo, likhulu kakhulu, futhi kude nakho konke ukudla, lukhona ngesimo esilijwayele.
Ekhiqizweni kwezimboni, kusetshenziswa okulandelayo okuphuma kushukela:
Le-carbohydrate ehlanjululwe kakhulu ayikwazi nje ukucolisiswa - isengezo esaziwa ngamunye wethu - kodwa futhi siyimvelo. Ufihla ngesinkwa nepasta. Yilapho ingxenye yokuqala ethakazelisa kakhulu iqala khona, ngemuva kokudla amantongomane, amapeyinti, uju, sizitika ngesibambiso, inani le-calorific elimangazayo - 375 kcal nge-100 g!
Kuyavela ukuthi asikho isidingo seshukela elicwengiweyo elidla nsuku zonke. Simane sizenzele, sithathe isimo esibi, singakwazi ukulahla ubumnandi obujwayelekile. Faka wezipuni ezi-3-4 zikafulawa etiyeni, hlala phansi kushukela oshukela noswidi ... Isisindo sikhula phambi kwamehlo ethu - kusukela kusibalo esincane kukhona izinkumbulo kuphela.
Kunezinhlobo eziningi zikashukela kangangokuba kufanelekile ukulahlekelwa ukubala:
Eqinisweni, okuqukethwe ikhalori kwemikhiqizo enjalo kuyefana. Kungani lokhu okungeziwe kulimaza hhayi kuphela emazinyweni nakubantu bethu, kodwa kuwo wonke umzimba, futhi ingabe kukhona inzuzo ekusetshenzisweni nsuku zonke kwe-sweetener enjalo?
Ungadla Amagajama amangaki Ushukela Ongadla Usuku: Izinganekwane Zama-Sweetener ezidumile
Ukuvikela ukwelashwa okuthandwayo, abathandi beswidi bathi izingcezu ezimbalwa zikashukela ocwengekile ngosuku kuyisinyathelo esidingekile sokwenza umsebenzi wobuchopho. Kodwa-ke, isitatimende esingesibindi simane nje siyinganekwane. Sidinga ushukela, kepha umzimba uwuthola kuma-carbohydrate ayinkimbinkimbi atholakala okusanhlamvu, izithelo, amajikijolo kanye nemifino, okusanhlamvu nokunye ukudla okune-fiber-rich. Ngasikhathi sinye, into ebalulekile ingena ekujuleni kwegazi kancane kancane - ukwehla kwezinga likashukela wegazi kuzokwenzeka kahle, futhi ngeke usithole isidingo "sokondliwa" kwasekuqaleni kwamaswidi.
Ingabe imikhiqizo engena esikhundleni semikhiqizo ehlanziwe iphephile - i-aspartame, i-neotam ne-sucralose? Ochwepheshe abakwazi ukuphendula lo mbuzo ngokungangabazeki. Ucwaningo lusaqhubeka kanti izingxabano ezizungeze ama-sweeteners okwenziwa abengekho. Kodwa-ke, into eyodwa iqinisekile - izengezo ezinjengalezi zifakwe ezinganeni nakwabesifazane abakhulelwe.
Mangakhi amagremu kashukela ongawadla ngosuku ukwehla isisindo? Ngeshwa, zonke izinyo elimnandi lizodumazeka kakhulu - ubukhazikhazi obunjalo obuphezulu buzosiza kuphela ekutholeni isisindo futhi bathole izilonda ezintsha. Ngabe ufuna ukukhipha amakhilogremu angeziwe, futhi ngesikhathi esifanayo unakekele impilo yakho? Shintshela ekudleni okunempilo nokunempilo ngokususa ushukela ekudleni kwakho noma ngokwehlisa ukudla kwakho kwansuku zonke kube okuncane.
Kuthiwani uma umkhuba omnandi unamandla kunawe? Esikhundleni sokucwilisa, faka uhhafu wethisipuni loju etiyeni. Okuqukethwe kwayo kilojoule akuncane kangako, kepha ngokuqinisekile ngeke kuyilimaze impilo yakho. Maye, lokhu akunakushiwo ngamaswidi ne-confectionery, isiraphu nesoda.
Imikhiqizo elandelayo nayo iwela 'kuhlu olumnyama':
Izithelo zezithelo ezivela emashalofini asezitolo - zingene esikhundleni sazo ezisanda kufakwa bese niphuza isiphuzo sevithamini ngaphambi kokudla kuphela.
Amabha (ama-Snickers, ama-Mars) - esikhundleni salokho, thatha ushokoledi obabayo obumnyama obunokuqukethwe kabhontshisi we-cocoa kusuka ku-70% kuya phezulu. Khumbula: I-5-10 g yokwelapha okunjalo ingavunyelwa kuze kube yi-16: 00.
Ukubhaka - kumakhekhe, kumakhekhe nakukhekhe kunoshukela omningi kakhulu nama-carbohydrate asheshayo angaguquka kalula abe ngamafutha.
Izithelo ezihlanganisiwe - khetha kuphela okusha futhi okungokwemvelo kakhulu.
Ukudla okulula nokudla okusheshayo - azinandawo ekudleni okunempilo nokunempilo.
Kuyadingeka futhi nokunciphisa umkhawulo ukusetshenziswa kwezithelo ezomisiwe - idlanzana lezithelo zomvini nezithelo ezi-5-4 zama-prunes noma ama-apricots omisiwe anele umzimba wethu. Okushiye konke kuzokuya "edepho lamafutha" kuzinze "emgqonyeni". Yazi isilinganiso kukho konke - futhi isibalo sakho sizoba sincane, futhi sibe nempilo - siqine.
Ungadla ushukela ongakanani ngosuku: ngifuna ukungena esikhundleni
Yini ongangeza kuyo itiye namakhethini enziwe ayikhaya esikhundleni somkhiqizo ojwayelekile? Izinketho eziningana kungenzeka:
Esikhundleni sokuqala kukhona imbiza ye-stevia. Inokunambitheka okumnandi kwemvelo futhi kufanela iphelele izitsha zakho ozithandayo ngaphandle kokulimaza impilo yakho.
Uju ngenye indlela enhle ushukela ocoliweyo. Qikelela futhi ungakuqedi ngokweqile: okuqukethwe yi-caloric yaleli Delicacy elimnandi kungama-360 kcal nge-100 g. ½ isipuni esilinganayo siyokwanela inkomishi ye-oolong yobisi enempilo.
Inketho yokugcina iyiswidi. Kodwa-ke, lo mkhiqizo une-drawback ebalulekile - unqatshelwe ngokuphelele ezinganeni.
Nqaba ubuthi obumnandi - khetha imithombo ye-glucose yemvelo nenempilo. Futhi ongoti bomtholampilo wethu bazosiza kulokhu. Sizokhuluma ngezici zokudla okufanele, khetha uhlelo bese udweba ukudla okulinganiselayo, ngenxa yokuthi uzokhohlwa ngenkinga yesisindo ngokweqile, ulahlekelwe isisindo ngaphandle kokuyeka ukudla okuthandayo. Khetha ubuncane nempilo. Ngena empilweni entsha nathi!
Kuyini ushukela ngokuya ngezinqubo ezinamakhemikhali ezinto eziphilayo, futhi kungani kubalulekile ukuqonda lapho ucubungula lolu daba?
Ukuze uphendule lo mbuzo ngokugcwele, kuyadingeka ukuthola ukuthi yiluphi uhlobo "ushukela" womzimba wethu - kulo mongo, kunjalo.
Ngakho-ke, i-glucose icutshungulwa emangqamuzaneni omuntu, ngenxa yalokho okukhishwa khona amandla adingekayo ukuze kuqinisekiswe zonke izinqubo ze-endothermic metabolic (okuwukuthi, lawo mandla adingekayo - inqwaba yokuphendula yenzeka).
Ama-kilojoules akhiqizwayo akagcini nje ngokuqothuka, aqongelela ezintweni ezi-macroergic - ama-adenosine triphosphate (ATP) molecule. Kodwa-ke, leli khompiyutha alikwazi ukuba semzimbeni womuntu isikhathi eside, ngakho-ke, ukuvela kwamafutha kwenzeka, kulandelwa ukumiswa kwawo.
Inani elifanele likashukela emadodeni
Kuleso simo, uma sicabangela ukudla okufanele okwenziwe ekhaya, singasho ngokuphephile ukuthi ukusetshenziswa okwengeziwe kwe- “carbohydrate esheshayo” akudingekile ngokomthetho, futhi imiphumela emnandi ilimaza kakhulu impilo.
Yebo, konke kunjalo - ngokuhlukile ezinkolelweni zezazi ezondlayo ezikholelwa ukuthi umuntu udinga izipuni ezimbalwa zikashukela ngosuku.
Lokhu kulula ukuchaza - lonke iphuzu ukuthi inani eliphelele loshukela umuntu aludinga ngempela ukuhlanganisa i-ATP futhi athole amandla eza nakho konke okunye ukudla.
Ukwakha imenyu ebinganelisa ngokuphelele zonke izidingo zoshukela ngaphandle kokulimaza impilo
Izazi zezempilo zincoma ukulandela ukudla okujwayelekile kwezikhathi ezinhlanu, okubandakanya isidlo sasekuseni, isidlo sasemini, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa nesidlo sakusihlwa.
Kuvunyelwe ukusebenzisa i-compote kusuka noma, kanye nemikhiqizo yobisi ebilisiwe.
Ingilazi eyodwa ye-compote noma i-kefir ifanela ngokuphelele izidingo zomzimba wendoda ngokuntuleka kweglucose (futhi awudingi ukufaka ushukela lapho). Qondisisa kahle, ekwakhiweni kwama-disaccharides amaningi, okuthi ngesikhathi sokwelashwa okushisa kugqeke ku-glucose ne-fructose. Manje kulula ukuqagela ukuthi kungani i-decoction yamajikijolo izoba mnandi ngisho nangaphandle kokufaka ushukela kuyo.
Ngakho-ke ukhohlwa ngawo wonke amaswidi namakhekhe - impilo yakho iyabiza kakhulu.
Kunenganekwane ebanzi yokuthi uju wemvelo unempilo kakhulu kunoshukela osesitolo futhi akunakuba namadiphozithi amafutha lapho usebenzisa lo mkhiqizo. Impela.
Ngemuva kwakho konke, iqukethe ama-carbohydrate asheshayo "99%" (ushukela kanye ne-fructose), ukuze yonke imiphumela ehlotshaniswa nokusetshenziswa kwayo ingafani nalawo abonwa "ngokuthanda" amaswidi. Futhi nokho - empeleni, akukho inzuzo evela kuju. Ngokuphikisana nombono wabo bonke abelaphi "abahle kakhulu".
Amacala lapho amnandi avunyelwe
Isici esiyinhloko se-glucose (njengawo wonke amanye ama-carbohydrate “asheshe”) ukuthi wephuka ngokushesha lapho singenelwa emzimbeni, futhi amandla atholakala ngenxa yokushayisana kokuphendula kwe-metabolic kumele asetshenziswe ngokushesha ukuze angangeni emafutheni. Ngaphandle kwalokho, inzuzo yesisindo izoqinisekiswa.
Ngenxa yokuthi owesilisa, odla amaswidi, futhi ongeke achithe amandla akhe khona manjalo, uzihlinzeka ngengqimba yezicubu ze-adipose.
Ukuvimbela lokhu kungenzeki, izazi zezempilo zivumela ukusetshenziswa kwekhisipuni elilodwa noma amabili kashukela (okungukuthi, umkhiqizo omsulwa, hhayi amaswidi, amakhukhi noma eminye imikhiqizo ye-confectionery, equkethe nenani elikhulu lamafutha agcwele) ngokushesha ngaphambi kwengcindezi enkulu engokwengqondo noma engokomzimba . Kulokhu, amandla angeziwe atholakala ngenxa yokuqhekeka kwe-glucose kuzomnika kuphela amandla ongeziwe kumuntu futhi kuzovumela ukufeza imiphumela ebaluleke kakhulu.
Izithombe ezinhle kakhulu ezimbalwa
Amadoda anendaba nempilo yawo kufanele enze iziphetho eziningana:
lapho ubala ukusetshenziswa koshukela okuningana, kuyadingeka ukuthi ucabangele kuphela ukugcwala koshukela ongena emzimbeni womuntu, ngoba wonke amanye ama-carbohydrate awathathi ingxenye enkulu kangako ezinqubweni ze-metabolic. Kungaba nengqondo ukucabanga ukuthi lapho bahlanganisa imenyu abaze babhekwe,
inani "lama-carbohydrate asheshayo" athathwe ngaphezu kokudla okuyinhloko kumele ancishiswe, futhi ngaphandle kokukhipha ngokuphelele kanye nomgomo. Lokhu kuyiqiniso kuwo wonke umuntu - abesilisa nabesifazane. Kuvunyelwe ukusebenzisa inani elincanyana lamaswidi kuphela uma kunomthwalo omkhulu wengqondo esikhathini esizayo esiseduze, okuthiwa "isiphepho sobuchopho",
ukubalwa kwenani elifanele likashukela kufanele kwenziwe kuphela, ngoba umuntu ngamunye unezici zakhe zomzimba, ubukhulu bakhe bezinqubo ze-metabolic, umehluko ekusebenzeni kwamandla.
Ngamanye amagama, indoda ayiludingi ushukela nakancane, kepha uma kunesidingo, amathisipuni angama-1-2 ngosuku avunyelwe, bese kuthi ngaphambi komthwalo.
Kungani simlutha kumaswidi?
Singumlutha wamaswidi kusukela sazalwa. Ubisi lukamama luqukethe i-lactose - i-disaccharide efanayo. Ukuyisebenzisa njengengane encane, umuntu ngaleyo ndlela, ezingeni lokungazi, uhlanganisa amaswidi nokuthile okuhle nokudingekile.
Isifiso esingavinjelwe sichazwa emazingeni e-hormonal. Iqiniso ngukuthi ushukela ocwengekile unento eyodwa afana ngayo nezidakamizwa ze-narcotic - zombili lezi zivuseleli, i.e. izinto ezidala ukukhishwa kwehomoni yenjabulo - i-serotonin. Umphumela: ngokwengeziwe sifuna ukuzwa ubumnandi nenjabulo, futhi ukuncika kuqala ukukhula.
Kepha ushukela ocwengekile uyisikhuthazi sokufakelwa, i.e. ngokuhamba kwesikhathi, kuzoyeka ukukhipha amandla kwe-serotonin, futhi imizwa emihle ingathathelwa indawo ukuguquguquka kwemizwelo.
Umlutha unganqotshwa kuphela yimizamo yomuntu. Shintshela ekudleni okulinganiselayo, yidla kuphela inani lokudla olunconywayo ubudala bakho. Futhi ingxenye efiselekayo ye-hormone yenjabulo ingatholakala nangezinye izindlela. Isibonelo, ukudlala ezemidlalo noma ukuhamba nje nabangane.
Ushukela: izinzuzo kanye nokulimaza umzimba
Ososayensi kanye nabathanda ukubamba iqhaza abenze ucwaningo kanye nezivivinyo eziningi bafinyelela eziphethweni ezidumazayo: lo mkhiqizo ungabizwa ngokuthi, ngaphandle kokubekwa phansi, "ibhomu lesikhathi". Ngethamo ngalinye, akulungile, futhi kwesinye isikhathi kuyalimaza izingxenye zomzimba wethu ezahlukene. Imvamisa, asikuboni ngisho lokhu, kepha ngesinye isikhathi esibuhlungu uzenza azizwe, eveza zonke izinhlobo zezinkinga zempilo.
Kepha isipiliyoni esidabukisayo sezigidi zabantu emhlabeni esihlaselwe yimikhiqizo kashukela asiphoqi ukuthi sishiya lo “ubuthi obumnandi”. Noma kunjalo, ngaphambi kokusebenzisa okulandelayo, kufanele uthole ukuthi yisiphi isithombe esithile esisilimazayo empilweni yethu.
Izici eziyingozi kakhulu
Iba imbangela enkulu yokukhuluphala kanye nokukhuluphala ngokweqile. Lapho kudliwa, kuvame ukubeka kumaseli wesibindi. Kodwa-ke, lapho nje wonke amaseli egcwele (lokhu kwenzeka lapho lo mkhiqizo uhlukunyezwa), khona-ke i-sucrose izongena ezindaweni ezinamafutha, iqoqeke esiswini nasezinqulwini. Ukukhuluphala ngokweqile futhi kungachazwa umuzwa wendlala "yamanga". Iqiniso ngukuthi ngaphambili kwe-lobe yobuchopho kunesiza esibhekele ukulamba nokudla. Amaswidi, asebenza kule ngxenye yobuchopho, adala ukukhohlisa kwendlala. Futhi noma ngabe usudle ngokwanele, uzofuna ukudla okunye ukuluma. Lokhu kuyisisekelo sokulimala ushukela kubantu.
Umphumela enhliziyweni. Ngenxa yokuthi i-thiamine (i-Vitamin B1) isuswa lapho ihlanjululwa, izicubu zenhliziyo ziyahlupheka. Futhi i-thiamine, phakathi kwezinye izinto, ihlinzeka ngemetabolism ejwayelekile kwizicubu ze-cardio-muscular, ukuntuleka kwayo kubangela ukwephulwa kwale nqubo - i-dystrophy.Umphumela walokhu yilokhu: ukusebenza kwenhliziyo kuya ngokuya kukhula, izinhlungu zivela, futhi ezimweni ezingavamile ngisho nokuboshwa kwenhliziyo.
Ukungena kwe-calcium. Ngokusetshenziswa njalo kwe-sucrose, isilinganiso sezinto ezithile ezibalulekile, njenge-calcium ne phosphorus, siyaphazamiseka. kudliwe ngokudla okumnandi akukona ukugaya. Ngemuva kwalokho uqala "ukuboleka" emathanjeni ngokwawo, okuwenza angabinamandla futhi abe ntekenteke, ngenkathi amazinyo ehlupheka, kungenzeka futhi.
Ukwehlisa umzimba wamavithamini athile. Akuwona nje kuphela ukuthi lo mkhiqizo awunazo izakhi zomzimba, futhi uqeda namavithamini akhona. Inkinga ukuthi ngokufakwa kwayo okujwayelekile, umzimba kufanele ususe amavithamini B ezinhlotsheni ezahlukahlukene (isibindi, izinso, inhliziyo). Lokhu kushoda kuholela ebuhlungwini obujwayelekile bekhanda, ukukhathala, ukuncipha kokudla kanye nokuqwasha.
Yehlise ukungazetheki. Ngemuva kokudla umthamo omkhulu ngokwanele, ukusebenza kwamaseli egazi, okubhubhisa ama-bacterium ayingozi emhlabeni wangaphandle, kwehla kakhulu. Kungakapheli amahora angama-3-5, amasosha omzimba abe buthaka cishe ngo-2/3. Ngalesi sikhathi, singabamba noma yisiphi isifo kalula. Ngemuva kwesikhashana, ukungasebenzi komzimba kubuye kusebenze kahle.
Izinqubo zokuguga okushesha. Imikhiqizo yoshukela ngamanani amakhulu inqwabelana izicubu zesikhumba. Ngenxa yalokhu, isikhumba silahlekelwa yiprotheni ebalulekile - i-collagen, okuholela ekulahlekelweni kokuqina kwezicubu futhi, ngenxa yalokho, ekubukekeni kwemibimbi. Kulimaza nezindonga zemithambo yegazi, kuzenze zibe buthakathaka, ukwephulwa okunjalo ohlelweni lwe-vascular kungadala ukuqina, ikakhulukazi kubantu asebekhulile.
Ukwehla kwamandla omzimba. Kunombono ojwayelekile ongalungile wokuthi unikeza amandla amaningi. Ngakolunye uhlangothi, yonke into iyiqiniso, ngoba ama-carbohydrate yiwona athwala amandla amakhulu, kodwa esimweni sokuzimele, isimo sehlukile. Okokuqala, i-metabolism engalungile ebangelwa ukuntuleka kwevithamini B1 ayikwazi ukudiliza ngokuphelele ama-carbohydrate futhi ikhiphe amandla, ukukhathala kuyabonakala. Okwesibili, uma izinga le-sucrose liphezulu kakhulu, khona-ke i-hypoglycemia iqala - isimo lapho ushukela egazini uqala ukuncipha kakhulu, futhi sithola ukunganaki nokungabi nalutho.
Ngakho-ke ingabe "ubuthi obumhlophe" okungenani bunezinto ezithile ezisebenzayo? Yebo, kepha bambalwa kakhulu kubo. Ngaphezu kwalokho, azinxephezele konke ukulimala kwalo mkhiqizo. Izici ezilandelayo ezinhle zingabizwa:
Kanciphisa kancane amathuba okuba ne-thrombosis,
Kuvimbela izifo ezihlangene
Isebenza ukugeleza kwegazi kubuchopho.
Yikuphi okuyingozi kakhulu?
Emhlabeni wanamuhla, izinhlobo ezimbili zivamile: i-beet nomhlanga. Ungabahlukanisa, okokuqala, ngombala: owokuqala umhlophe, owesibili onsundu. Omunye umehluko obaluleke kakhulu okuqukethwe kwe-sucrose. Kokubamhlophe okujwayelekile kungaphezulu kwama-99%, emhlangeni - 90% (okuseleyo yi-10% kungama-molasses noma amanzi). Kulula ukuqagela ukuthi ukukhiqizwa komhlanga akulona ingozi, kepha akukho mehluko oyisisekelo kulezi zinhlobo.
Uma sikhuluma ngezakhi - ushukela ne-fructose - khona-ke lokhu okuzoba yingozi kakhulu. Nguye obangela ukulimala okukhulu koshukela, ongakwazi ukuphuma kumuntu, abe imbangela yokukhuluphala kanye nezifo zemithambo yegazi.
Ubulili nobudala bomuntu Izinga loshukela
Izingane ezivela eminyakeni engu-2-5 ubudala 25 5
Izingane ezineminyaka engu-5-9 ubudala 30 7
Amantombazane 10-14 40 8
Abafana 10-14 40-45 8-9
Intsha 14-18 50 10
Amantombazane 19-30 55 11
Amadoda 19-30 60 12
Abesifazane 30-50 45 9
Amadoda 30-50 55 11
Abesifazane ngemuva kweminyaka engama-50 40 8
Amadoda ngemuva kweminyaka engama-50 50 10
Kodwa-ke, noma ngabe ziningi kangako, umkhiqizo ungathinta kabi impilo yabantu. Ukuze ungathathi izingozi futhi ungakhathazeki, kunconywa ukwehlisa izinkomba okungenani kabili. Qaphela ukuthi kufanele ibe ngu-3.3-55 mmol / L.
Ungangena kanjani esikhundleni?
Yini engathatha isikhundla se "ubuthi obumhlophe" Ngokudla, izithako ezahlukahlukene zoshukela zivame ukusetshenziswa, kepha ukuphepha kwazo akukaze kufakazelwe.
Njengamanje ithandwa kakhulu, okuyisitshalo esinamaqabunga amnandi kakhulu.Akuqukethe i-sucrose, ngakho-ke kuphephile ngokuphelele ukuyisebenzisa. UStevia, yize enokunambitheka okumnandi, akulula ukujwayela, kunika intukuthelo ebabayo. Ngakho-ke, ngamaqabunga ngokuvamile aphuza, isibonelo, itiye.
Imikhiqizo elungisiwe futhi ithathelwa indawo eminye imikhiqizo elandelayo:
Ilayisensi kungenye yemvelo. Ngenxa yokunambitheka kwayo okumnandi, kuvame ukungezelelwa amakhekhe, amakhekhe neziphuzo. I-Licorice nayo inomphumela omuhle empilweni yethu, isiza isisu namaphaphu ukuba isebenze.
Isiraphu yosuku, noma ingenakuziqhayisa ngokungalimazi, ngoba iqukethe i-sucrose, kepha inezici ezimbalwa ezisebenzayo. Izinsuku zigcwalisa isiraphu ngamavithamini A, C, E.
Ngenxa yezinzuzo ezingenakuphikwa zomzimba, wonke umuntu udinga ushukela. Kodwa-ke, amaqembu athile abantu kufanele ayeke ukuyisebenzisa ngendlela yamakhristalu e-sucrose ajwayelekile. Lokhu kufaka phakathi:
Isifo sikashukela Ukusetshenziswa kwe-sucrose ne-glucose kungadala impilo engeyinhle kuleli qembu labantu, kanye nokuthuthukiswa kwezimo eziyingozi empilweni nasempilweni, kufaka phakathi i-sugar coma,
Izingane kanye nabantu abadala abanesifo sofuzo esisoshukela. Banobungozi obukhulu bokungasebenzi kahle kwe-pancreatic,
Ngumzimba ogcwele futhi onamafutha. Kunobungozi obukhulu bokuthola isisindo esengeziwe, kanye nokukhula kwe-thrombophlebitis kanye nokungasebenzi kahle ekwenzeni i-insulin,
Ukuthambekela kobandayo nezifo ezithathelwanayo. Ukudla kakhulu ushukela nsuku zonke kusiza ukwehlisa izivikelo zomzimba,
Abantu abaphila impilo yokuhlala. Imizimba yabo isebenzisa amandla amancane kakhulu ngosuku kunokuba ithola imikhiqizo. Amandla asele aguqulwa abe ngamafutha futhi agcinwe lapho agcinwe khona. Ngenxa yalokho, umuntu usheshe akhuluphele futhi athole imithambo yegazi evalelwe i-cholesterol.
Kufanele wenqabe ushukela othambekele ekucindezelekeni kanye nasezinhlotsheni ezahlukahlukene zomlutha. Leli qembu labantu lijwayela ukwanda okwenziwe ngokungemthetho kwe-serotonin futhi ngokushesha liqala ukusebenzisa ushukela ngamanani amakhulu ngokweqile okujwayelekile kwansuku zonke, libangela ukulimala okukhulu emzimbeni.
Ayikho imithetho ecacile yezokwelapha ekhombisa ukutholakala ushukela okuvunyelwe okuphezulu nsuku zonke. Kodwa-ke, ochwepheshe abavela kwiWorld Health Organisation (WHO) bazama ngokomqondo ukuthi basungule ushukela owamukelekayo ngosuku.
I-WHO ibalwe ngokwehlukana amazinga kashukela nsuku zonke ezingane nakubantu abadala. Inani eliphezulu lale carbohydrate kumakhalori akufanele lidlule i-10% yenani eliphelele lamakhalori adingekayo ukuze umzimba usebenze phakathi nosuku. Kodwa-ke, ukuze uqiniseke ngokudla okunempilo, inani elinconyiwe loshukela oludonswa ngosuku akufanele lidlule ama-5% kilojoule adingekayo ngosuku lomzimba womuntu.
Okuqukethwe kwekhalori kwe-1 g ushukela ngu-4 kcal.
Ngokuya ngeminyaka nobudala bomuntu omdala, izinkambiso zikashukela ezidliwe nguye ngosuku ziyizinkomba ezinjalo kumagremu:
Kumantombazane nabesifazane abaneminyaka engu-19 kuye kwengama-30 ubudala - ama-25 g (5 tsp), inani eliphezulu lama-50 g (10 tsp),
Kwabesifazane abasukela eminyakeni engama-30 kuye kwengama-50 - i-22,5 g (4.5 tsp), ubuningi obungama-45 g (9 tsp),
Kwabesifazane abaneminyaka engaphezu kwengu-50 - 20 g (4 tsp), ubuningi obungu-40 g (8 tsp),
Kubafana nabesilisa abasuka eminyakeni engama-19 kuye kwengama-30, isilinganiso soshukela ngosuku singama-30 g (6 tsp), isilinganiso esingu-60 g (12 tsp),
Kwabesilisa abasukela eminyakeni engama-30 kuye kwengama-50 - 27,5 g (5.5 tsp), ubuningi be-55 g (11 tsp),
Kwabesilisa abaneminyaka engaphezu kwengu-50 ubudala - 25 g (5 tsp), esiphezulu 50 g (10 tsp).
Izindinganiso ezinjalo zilungele labo bantu abasebenza ngokuzikhandla ngokomzimba okungenani imizuzu engama-30.
Izinga nsuku zonke lokudla ushukela kwezingane libuye lincike eminyakeni yengane:
Ezinganeni ezineminyaka engu-2-3 ubudala - 12,5 g (2,5 tsp), isilinganiso esingu-25 g (5 tsp),
Izingane ezineminyaka engu-4-8 ubudala - i-15-17,5 g (3-3.5 tsp), ubuningi be-30-35 g (i-6-7 tsp),
Amantombazane aneminyaka engu-9-13 ubudala - 20 g (4 tsp), inani elingu-40 g (8 tsp),
Abafana abaneminyaka engu-9-13 ubudala - 22,5 g (4,5 tsp), isilinganiso esingu-45 g (9 tsp),
Amantombazane aneminyaka engu-14-18 ubudala - 22,5 g (4,5 tsp), inani elingu-45 g (9 tsp),
Ama-Guys aneminyaka engu-14-18 ubudala - 25 g (5 tsp), isilinganiso esingu-50 g (10 tsp).
Ukunciphisa umkhawulo ukusetshenziswa koshukela ebuntwaneni nasebusheni kuphela ngemithi kadokotela. Ngaphandle kwalokho, kufanele ulandele izincomo ezisunguliwe, ngoba izingane zisebenzisa amandla amakhulu phakathi nosuku lokufunda nemidlalo esebenzayo. Kepha ngasikhathi sinye, kufanelekile ukukhumbula ukuthi ushukela utholakala emikhiqizweni eminingi ethandwayo.
Uma ucubungula ukuthi iyiphi ishukela evamile ngosuku eyamukelekayo ukusetshenziswa, kufanele kukhunjulwe ukuthi inani elinconyiwe kanyekanye lifaka zonke izinhlobo zikashukela ezisetshenziswa ekudleni, kufaka phakathi i-sucrose, ushukela, i-dextrose, imaltose, i-molasses, isiraphu kanye ne-fructose.
Kuwo wonke ama-100 g wokudla, leli nani loshukela liqukethe:
Isinkwa - 3-5 g
Ubisi 25-50 g,
U-ayisikhilimu - kusuka ku-20 g,
Amakhukhi - 20-50 g
Amaswidi - ukusuka ku-50 g,
I-Ketchup kanye nososo wesitolo - 10-30 g,
Ummbila oqoshiwe - kusuka ku-4 g,
Amasoseji obhemayo, okhalweni, wezinkuni, amasoseji - kusuka ku-4 g,
Ibha likashokolethi wobisi - 35-40 g,
Isitolo se-kvass - 50-60 g,
Ubhiya - 45-75 g
IMacaroni - 3,8 g
I-yogog - 10-20 g,
Utamatisi omusha - 3.5 g,
Ubhanana - 15 g
Lemons - 3 g
Ama-Strawberry - 6.5 g
Okusajingijolo - 5 g
Amabhilikosi - 11.5 g
Apula - 13-20 g,
Imango - 16 g
Iziphuzo ze-Carbonated nazo ziqukethe ushukela omningi, okuqukethwe kwawo, noma inani elincane le-ketshezi, kungadlula okujwayelekile kosuku kumdala:
Coca Cola 0.5 L - 62,5 g,
I-Red Bull 0,25 L - 34,5 g.
Ungawuqeda kanjani umlutha kashukela
Ukuqeda umlutha kashukela, njenganoma yikuphi okunye, kufanele kwenzeke ngezigaba. Ngaphandle kwalokho, umzimba, ojwayele ukusebenzisa izingxenye eziphakeme zikashukela ngosuku, ngokungazitholi usuthole umthamo ojwayelekile woshukela, uzosabela nomuzwa wobuthakathaka nokunganaki. Ukwelashwa okunjalo kuzoba ingcindezi enkulu kumuntu, futhi kungaholela ngisho nasekuqubukeni kolaka kanye nokudangala okujulile.
Ukusula umzimba kahle kusuka esilinganisweni esiyingozi se-glucose, kufanele uhambisane nale mithetho:
Thela ushukela enkomishini ngaphambi kokuthulula isiphuzo kuwo. Ngaso leso sikhathi, kuzo zonke izinsuku ezingama-2-3, sinciphise inani likashukela lithululelwa ngu-0.5 tsp. Ungazikhohlisa ngokuqala ngokuthululela isipuni esijwayelekile se-2-2 enkomishini, bese ususa uhhafu wesipuni lapho. Ngemuva kwezinsuku ezihleliwe ezingama-2-3, kuthathwa izipuni ezinoshukela ezi-1,5,5,5 enkomishini bese kuthi isipuni se-0.5 siphinde sisuswe.
Thola umsuka oyinhloko kashukela, bese uqala ukunciphisa ukusetshenziswa kwawo kancane kancane. Imvamisa, imikhiqizo enjalo yiziphuzo ezinoshukela ezinekhabhoni, ushokoledi, amaswidi noshukela ongezwe itiye nekhofi.
Isifiso sokudla amaswidi sikhuphuka ngokuntuleka kwamavithamini emzimbeni. Ukuxazulula le nkinga, kungcono ukuthi uqale usebenzise ama-vithamini complexes. Ukuqeda umlutha kashukela, kubalulekile ukubuyisa i-magnesium, iodine, amavithamini B6, C noD.
Phuza okungenani amalitha amanzi ayi-1.5-2 phakathi nosuku. I-Liquid isiza ukususa ubuthi emzimbeni futhi iqeda indlala.
Ukuxubha amazinyo akho ekuseni nakusihlwa ngamazinyo eminti, futhi ngemuva kokudla, ngaphambi kokudla amaswidi, hlamba umlomo wakho ngezimbambo ezikhethekile zokuhlanza. Ngemuva kokusebenzisa le mikhiqizo, amaswidi abonakala emnandi ekunambithekeni.
Lala amahora angama-8 ngosuku. Ukulala ngokuphelele okunempilo kuthuthukisa inhlala kahle futhi kunciphisa kakhulu isifiso samaswidi.
Zama ukudla imifino, izithelo nenyama enoshukela omncane nemikhiqizo yobisi. Noma kunjalo, akufanele usebenzise imikhiqizo efaka i-aspartame sweetener. Le nto ithinta kabi umsipha wenhliziyo namanyikwe.
Ehlelweni lokwenqena ukusetshenziswa koswidi ngokweqile, kunconywa ukukufaka esikhundleni sezikwele ezincane ezi-2 zikashokholethi omnyama nezithelo.
Ukusetshenziswa kakhulu koshukela kuyisishayo sekhulu lama-21.
Ukutholakala okuningana futhi okulula kwemikhiqizo enokuqukethwe ngokweqile kwama-carbohydrate alula kuholela ekusetshenzisweni okungalawulwa koshukela, okubuye kube nomphumela olimazayo emzimbeni womuntu.
Izikhungo eziholayo emhlabeni zisebenzisa izigidi zamaRandi ocwaningweni, ngesisekelo lapho amanani athile okudla asuselwa khona, kufaka phakathi umthamo woshukela wabesifazane nsuku zonke.
Njengomthetho, bonke abesifazane bayizinyo elimnandi elimangalisayo.Ngenxa yemvelo yabo, bathambekele kakhulu ekuthandeni amaswidi kanye nethonya labo empilweni yabo.
Othile ngeke aziphikise ngokwabo i-bun, othile akakwazi ukucabanga impilo ngaphandle koshokoledi, anikeze othile ujamu. Ukudla amaswidi amaningi nangaphezulu, ngifuna kakhulu futhi hhayi ukugqekeza lo mbuthano.
Iqiniso ngukuthi umzimba womuntu awushintshiwe ukuze udonse imithamo emikhulu yama-carbohydrate alula. Ngenxa yokufakwa ngokushesha kwe-sucrose, izinga loshukela egazini likhuphuka kakhulu, kudedelwa i-insulin.
Ngenxa yalokho, umphumela "we-carbohydrate yindlala" uyenzeka. Ngokombono wokubuka komzimba, zonke izinto ezitholakele zithathwe ngokushesha kakhulu futhi zisadingeka. Ukuthola ingxenye entsha kubangela okunye ukuhlinzwa, okwenza umbuthano onobubi. Ingqondo ayikwazi ukuqonda ukuthi empeleni amandla amasha awafuneki futhi iyaqhubeka nokusayina.
Ngaphezu kwalokho, ushukela unomthelela ohlelweni lwe-dopamine lwesikhungo senjabulo yobuchopho, obangela umphumela ofanayo nokusetshenziswa kwama-opiates. Ngakho-ke ngezinga elithile, ukusetshenziswa kwalo ngokweqile kufana nokulutha kwezidakamizwa.
Iqembu lengozi lifaka abantu abazwela ukwehla kwamazinga kashukela egazini.
Imvamisa lokhu kubangelwa izici zofuzo zomzimba futhi akusilo uphawu lokuthanda obuthakathaka noma ukuthamba.
Ukwehla kwamazinga kashukela kuholela ekushintsheni kwemizwa, okwenza ubuchopho bufise amaswidi, ongasiza ekwenziweni kwehomoni yenjabulo serotonin futhi lapho ulungisa isimo.
Ukusetshenziswa kweshukela ngamanani amakhulu kubangela ukuphazamiseka okuningi ekusebenzeni cishe komzimba wonke.
Ukonakala kwesifo sokuzivikela komzimba kwenzeka, i-digestibility yamaminerali iyancipha, ukuqina kwamehlo, ukukhuphuka kwamazinga glucose kanye ne-insulin, indawo enhle yezifo zokukhunta iyakhiwa, izinguquko ezihlobene nobudala ziyasheshiswa.
Ngokuphikisana nesizinda salezi ziphazamiso, izifo ezibangelwa yileso sifo ziqala ngokuhamba kwesikhathi: ukutheleleka, isifo sokuqina kwemithambo yethambo kanye nesifo samathambo, isifo sikashukela kanye nesikhumba esidabukisayo.
Ukudla ushukela nsuku zonke kwabesifazane
Ngokusho kweWorld Health Organisation, izinga likashukela eliphakanyisiwe ngosuku kwabesifazane lingama-25 g (5%), okuyisilinganiso esivumelekile esingu-50 g (10%).
Lezi zibalo zilingana nezipuni ezi-6 nezili-12. Izinombolo ezinikezwe emabondeni ngamaphesenti wokuqukethwe kwamakhalori aphelele kokudla okudliwayo ngowesifazane phakathi nosuku.
Isibonelo, kowesifazane, isilinganiso esimaphakathi sokudla nsuku zonke singama-kilojoule angama-2 000. Kulawa, ushukela ungaba ngaphezulu kwe-200 kcal (10%). Uma sikhumbula ukuthi ku-100 g kashukela olinganiselwa ku-400 kcal, kuvela ngqo ama-g angama-50. Kufanele kukhunjulwe ukuthi leli inani lishukela eliphelele, kufaka phakathi lokho okuqukethwe yimikhiqizo, hhayi isisindo esiyishukela soshukela.
Isimo sikashukela ngosuku kubantu besifazane sinokwehluka ngokuya ngamapharamitha womzimba ngamunye. Ngakho-ke, abesifazane ababamba iqhaza kwezemidlalo futhi bahola indlela yokuphila esebenzayo bangadla amakhalori amaningi ngaphandle kokulimaza impilo, ngoba zisazoshiswa ngokushesha. Uma zingasebenzi noma zithambekele ekubeni ngokweqile, kungcono ukuyeke ngokuphelele ukusetshenziswa kwemikhiqizo ezinoshukela neminye equkethe ushukela.
Ukudla okufihla ushukela
Abesifazane kwesinye isikhathi abakuboni ukuthi kukhona okuqukethwe ushukela omkhulu emikhiqizweni ethile. Ngakho-ke, noma bezama ukudla kahle, bayaqhubeka nokudla ukudla okungenamsoco ngokungazi.
Imikhiqizo ephezulu kashukela ifaka:
izindlela zokuphumula ezisheshayo: i-granola, i-oardmeal ye-custard, ama-cornflake, izikhwama ezibunjiwe, njll.
zonke izinhlobo zamasoso (kufaka phakathi i-ketchup ne),
amasosi abhemile futhi aphekwe,
imikhiqizo yokubhaka neyokhonkolo,
iziphuzo (kufaka phakathi utshwala): iziphuzo, ushukela omnandi, ubhiya, utshwala, amawayini amnandi, njll.
Yikuphi ukudla okunoshukela ocashile kakhulu? Impendulo ekuvidiyo:
Kungenzeka ubhekane nokuphuza ushukela ngokweqile.Kunezindlela eziningi nezindlela zokumelana nesilingo nokuqina kwesitimela. Kuze kube manje, amatafula akhethekile wokuqukethwe ushukela ekudleni, ama-Calculator wokubala indlela odla ngayo nsuku zonke, nokunye okuningi sekuhlanganisiwe. Ukuhola indlela yokuphila enempilo kuyasiza futhi kuyimfashini, ngakho-ke akufanele uhlehlise izinguquko ngokuhamba kwesikhathi. Uma ufunda lo mbhalo, okungenani ucabange ngesidingo sokushintsha okuthile. Futhi lokhu kusho ukuthi kusazothatha izinyathelo ezimbalwa kuphela eziya ekusaseni elinempilo.
Ushukela uwumkhiqizo wokudla omnandi oqukethe ama-carbohydrate anyibilikisiwe. Ushukela olula ubizwa ngokuthi ama-monosaccharides futhi afaka i-glucose, eyaziwa nangokuthi i-dextrose, i-fructose ne-galactose. Ama-Disaccharides (i-sucrose noma ushukela wethebula) ajwayele ukusetshenziswa ekudleni. Izinto ezihlukile ngamakhemikhali nazo zinganambitheka kamnandi, kepha azihlukaniswa ngoshukela. Ezinye zazo zisetshenziselwa indawo kashukela noma i-sweetener yokwenziwa.
Isimo ushukela ngosuku - 50 amagremu
Ngezinkombandlela zeWorld Health Organisation, ukudla nsuku zonke ushukela kumuntu okhulile (owesilisa noma owesifazane) onenkomba evamile yomzimba (BMI) kufanele kube ngaphansi kwamaphesenti ayi-10 kilojoule ekhishwe nsuku zonke, noma cishe amagremu angama-50 (amathisipuni ayi-12). Ukunciphisa lesi sikhombisi ku-5% kuzoletha izinzuzo ezengeziwe empilweni yabantu.
Lo mhlahlandlela ususelwa ekuhlaziyeni kobufakazi besayensi bamuva mayelana nokukhuluphala ngokweqile noma ukukhuluphala. Isibonelo, ucwaningo lukhombisa ukuthi izingane eziphuza ama-sodas nsuku zonke kungenzeka ukuthi zikhuluphele kunezingane eziziphuza ngezikhathi ezithile. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa ushukela wamahhala ngenhla kwesilinganiso esinconyelwayo kwandisa ingozi yokuwohloka kwamazinyo nezinkinga zamazinyo.
Ubusuku bonyaka omusha yisikhathi lapho amashalofu wesitolo agcwele ushokolethi emaphaketheni akhanyayo, futhi wonke umuntu uyabhaka ezungeza. Ithebula loNyaka oMusha kanye namaholide asebusika nawo awukwazi ukwenza ngaphandle kwesamba esandayo samaswidi. Ungadliwa ushukela ongakanani ngaphandle kokulimaza impilo? Avelaphi amathiphu wokuqothula ngokuphelele ushukela ekudleni? Futhi yiluphi ushukela ongawuthanda uma ungakulungele ukuhlala ngokuphelele ngaphandle koshukela?
Ngabe ushukela wonke uyafana?
Kwesinye isikhathi kunzima kakhulu ukuqonda inani elifanele likashukela elingadliwa ngosuku ngaphandle kokulimaza impilo yomuntu siqu. Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukuqonda kahle umehluko phakathi koshukela esimuthulula esikhwameni noshukela wemvelo emifino nezithelo.
Le mikhiqizo iyizinto ezihluke ngokuphelele. Ushukela wethebula uwumphumela wokukhiqizwa kwezimboni futhi awunakwenza lutho ngoshukela wemvelo, ocebile ngamanzi, i-fiber kanye nezakhi zomzimba ezahlukahlukene ezizuzisa kakhulu umzimba.
Labo ababheka impilo yabo ngokucophelela futhi bafuna ukunciphisa umzimba kufanele bakhethe ukhetho lwesibili futhi bathembele kushukela esimweni salo semvelo.
Ngokusekelwe kwimininingwane eyaqoqwa ngonyaka we-2008 eMelika, umuntu ojwayelekile udla amakhilogremu angaphezu kuka-28 we ushukela ogcotshwe ngonyaka. Amajusi wezithelo neziphuzo ze-carbonated azange afakwe kulesi sibalo, okubonisa ukuthi inani elikhonjisiwe ushukela alibukelwa phansi.
Ngasikhathi sinye, kwanqunywa ukuthi isilinganiso kanye nenani eliphelele lomkhiqizo omnandi odliwe lalingama-gramu ayi-76,7 ngosuku, elingana cishe amathisipuni ayi-19 kanye namakhalori angama-306. Singasho ukuthi lokhu kuyinto ejwayelekile noma umthamo wansuku zonke kumuntu.
Eminyakeni yamuva nje, kuye kwaba okubalulekile ukuthi umuntu adle kahle, futhi abantu benza konke ukwehlisa umthamo wokusebenzisa ushukela, kepha lesi sibalo sisesekude nokwamukelekayo. Kuphephile ukusho ukuthi inani labantu laqala ukuphuza iziphuzo ezinoshukela obuncane, elingajabuleki nje, futhi izinga lokusetshenziswa kwalo kwehla.
Kodwa-ke, ukusetshenziswa kashukela okwenziwe nge-granured kusekuphezulu, okudala ukukhula kwezifo eziningi, kanye nokwanda kwalezo ezikhona. Ushukela omningi ekudleni kuholela kulezi zifo ezilandelayo:
ezinye izinhlobo zezilonda ezinomdlavuza,
Unganquma kanjani isamba ephephile ushukela?
Isikhungo Sokufundwa Kwezifo Zenhliziyo senza izifundo ezikhethekile ezisize ekusunguleni inani eliphezulu likashukela ongalusebenzisa. Abesilisa bavunyelwe ukudla ama-kilojoule ayi-150 ngosuku (alingana nezipuni eziyi-9 noma ama-37,5 amagremu). Kwabesifazane, leli nani lizokwehliswa libe amakhalori ayi-100 (amathisipuni ayi-6 noma amagremu angama-25).
Ukuze ucabange kahle lezi zibalo ezingasho lutho, kufanele kuqashelwe ukuthi emgodini owodwa omncane weCoca-Cola uzoqukethe amakhalori angama-140, kuthiwe kubhaxa le-Snickers - amakhalori ayishukela ayi-120, futhi lokhu kude kakhulu nokujwayelekile koshukela.
Uma umuntu ebheka ukwakheka kwakhe, esebenzayo futhi efanelekile, khona-ke umthamo onjalo kashukela ophuziwe ngeke umlimaze, ngoba la makhalori angashiswa ngokushesha okukhulu.
Ezimweni lapho kunesisindo esikhulu ngokweqile, ukukhuluphala noma ngisho nesifo sikashukela, udinga ukuhlala kude nokudla okunoshukela futhi udle ukudla okususelwa ushukela okwedlula kabili ngeviki, kepha hhayi nsuku zonke.
Labo abanamandla amakhulu bangashiya ngokuphelele lokho kudla okugcwele ushukela. Noma yiziphi iziphuzo ze-carbonated, i-khekhe noma ukudla okulula ziqukethe ushukela futhi kunomthelela ongemuhle enhlalakahleni.
Ngempilo yakho nokuphepha kwakho, kungcono ukudla ukudla okulula. Kungukudla kwesithako-mono okuzosiza ukugcina umzimba usesimweni esihle.
Ungamelana kanjani nesilingo?
Ezokwelapha zithi iziphuzo ezinoshukela nokudla kungavusa izingxenye ezifanayo zobuchopho bomuntu njengezidakamizwa. Kungakho abantu abaningi bengakwazi ukuyilawula futhi idle amaswidi ngamanani angenamkhawulo.
Ukuphela kwendlela yokuphuma kulesisimo ukukhokhisa ngokuphelele futhi kakhulu ushukela wakho. Kulesi simo kuphela lapho singakhuluma ngokuqeda ukuxhomekeka kwe-pathological.
Ukukhohlisa isisu sakho, ungazama ukuphuza kuphela amanzi ahlanzekile ngaphandle kokufaka amnandi kuwo. Kuzoba kuhle ukwenqaba itiye elimnandi, ikofi noshukela. Esikhundleni sokudla okumnandi okungadingekile komzimba, kufanele ukhethe lokho okubandakanya ulamula, isinamoni, i-ginger noma i-alimondi.
Ungahluka ekudleni kwakho ngokusebenzisa ubuhlakani nobuhlakani. Kunezindlela eziningi zokupheka ezibandakanya inani eliphansi loshukela. Uma ufuna ngempela, ungangeza ekudleni i-analog yemvelo yeshukela egayiwe - ukukhishwa kwe-stevia herb noma.
Ushukela nokudla okulula
Indlela ekahle yokuqeda umlutha kashukela ukuyeka ngokuphelele ukusetshenziswa kokudla okulula. Kungcono ukwanelisa izidingo zakho zamaswidi ngezithelo, amajikijolo, nemifino emnandi. Ukudla okunjalo kungadliwa kunoma yiliphi inani futhi akunikezi ukubalwa kwamakhalori kanye nokufunda njalo kwamalebula namalebula.
Uma, noma kunjalo, ingekho indlela yokuqeda ngokuphelele imikhiqizo eseqediwe, khona-ke kufanele uyikhethe ngokucophelela ngangokunokwenzeka. Okokuqala, kubalulekile ukuqonda ukuthi ushukela ungabizwa ngokuhlukile: i-sucrose, ushukela, ushukela, isiraphu, njll.
Akumele nakancane uthenge umkhiqizo kuhlu lwezingxenye zalo ushukela endaweni yokuqala. Awungeke ukhethe umkhiqizo oseqediwe uma uqukethe uhlobo loshukela olungaphezu kolulodwa.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukunaka ushukela onempilo, isibonelo, uju, i-agave, kanye noshukela kakhukhunathi wemvelo kubonakale kukuhle kakhulu kusuka endaweni yokubuka yokudla.